Ywar Thar Lay (YTU): 1/1/09
လိမ်မျောသီးတှတေောငျလိုပုံနပွေီ။ အိမျကိုသယျရတာတောငျ မနိုငျမနငျးလေ။ ကနျြကြောငျးကွှပျကွှပျအိတျတဈလုံး တဈလုံးကို နတေို့ငျးသယျနရေတာ။ အိမျကလူတှကေလညျး စားလို့တောငျမနိုငျတော့တဲ့ အခြိနျ။ လိမ်မျောတှေ ပေါတဲ့ ရာသီရောကျပွနျပါပကော….
ဘုံရုံမှာ တဈလလောကျအလိုတညျးက ကနြျောတို့တှေ စလကေ့ငျြ့နကွေရပွီလေ။ ဗုံသံတဈစီစီနဲ့ လကျမောငျးအောငျ့ တဈကိုယျလုံးနာအောငျကငျြ့ကွရတာ။ လူငယျတှဆေိုတော့လညျး အပြျောအပါးနဲ့ ကုသိုလျရေးမို့ တတပျတအားပါဝငျကွတာပါပဲ။ ကနြျောတို့ကလို့ ရလာတဲ့ အလှူငှနေဲ့ ဘုံရုံကိုပွုပွငျရမှာပါ။ ဘုံရုံမှာ တဈနှဈနှဈစာလာဖတျကွတာက မနညျးမနော။ ကြောငျးလခလေး အနညျးအကဉျြးသာကောကျခဲ့တာမို့ ကြောငျးပွငျဖို့က မလောကျငှ။ နှဈသဈကူးခြိနျ လာဘျလာဘ ကောငျးတယျဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ တရုတျအိမျတျောတျောမြားမြားက ကနြျောတို့ နဂါးအဖှဲ့ရဲ့ အကကိုကွိုဆိုနကွေ လှူဒါနျးနကွေ။
လူကိုးယောကျပါတဲ့နဂါးတဈကောငျရဲ့ ကြောရိုးက သိပျမရှညျလှနျးလှပါဘူး။ ကွီးမားလေးလံလှနျးတဲ့ ဦးခေါငျးကို လေးခငျြလေးပါစေ အလှအပတှမှေမျးမံ မကျြလုံးနှဈစုံကိုလညျး မီးလုံးတှနေဲ့ အလှဆငျမပကျြ။ ဗုံသံနဲ့ အတူ နဂါးကွီးနိုးထလာခြိနျကတော့ သိပျကိုကွညျ့လို့ကောငျးပွီပဲပေါ့။ ရလှေိုငျးပုံတှေ အခုနျအကြျောတှေ အတိုးအဝှတှေ့နေဲ့ နဂါးတဈကောငျရဲ့ သကျဝငျမှုကို ပငျ့သကျတှနေဲ့ လှုပျရှားပေးရတာ တဈမြိုးတော့ စိတျလှုပျရှားစရာ။ ရှဲဆရာရယျ နဂါးခေါငျးနဲ့ အမွီးရဲ့ တဈလှညျ့စီဦးဆောငျမှုအောကျမှာ စညျးခကျြညီ အလိုကျသငျ့ ကရတာလေ။ အလိုကျသငျ့မဟုတျလို့ကတော့ နှဈလကျမ ပတျလညျ အသားတုတျနဲ့ မကျြနှာနဲ့ မိတျဆကျဖို့ကမြားနတေော့တာ။ ရှဲဆရာရဲ့ လကျနှဈဖကျကိုလညျး သတိထားကွညျ့ရပါသေးတယျ။ နဂါးကွီးရဲ့ ကကွိုးကကှကျတှကေို သူ့လကျခြောငျးတှနေဲ့ အကူးအပွောငျးလုပျသှားခဲ့တာကိုး။
အပြျောဆုံးအခြိနျကတော့ ရှဲဖြောကျတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ ပြောကျသှားတဲ့ ရှဲလုံးကို တဈကိုယျလုံး ဟိုရမျးဒီရမျးနဲ့ လိုကျရှာရတဲ့ ကကှကျပါ။ အားလုံးပငျပနျးပငျမယျ့ ဟေး လို့ တညီတညာတညျး အျောလိုကျရငျ တီးနတေဲ့ ဗုံသံနဲ့အတူ သှေးတှကေ ဆူပှကျနမွေဲ။ ဘယျလောကျပငျပနျးပါစေ ရှဲဖြောကျပွီဆိုရငျ လူတိုငျး ဝငျကခငျြနကွေပွီ။
နှဈသဈကူးမတိုငျခငျနှဈရကျလောကျတညျးက ကနြျောတို့ရပျကှကျပတျပတျလညျ ကနကွေရပွီ။ ကနြျောတို့တှေ စိတျဝငျစားကွတာက အိမျတိုငျးအိမျတိုငျးက တရုတျမခြောခြောလေးတှရေယျ အထုတျနီနီလေးတှရေယျပါ။ အအေးပုလငျးတှဆေိုတာ မသောကျခငျြမှ အဆုံး ခြောငျးဆိုးမှကို ရပျကွတော့တာ။ ခြိုခဉျြ ခြောကလကျတှလေညျး လကျတှနေဲ့ ဆုပျဆုပျလို့ ယူသှားလိုကျကွတာ။ ကောငျးနိုးရာရာလေးတှကေို စားမယျလို့ ခါးစညျးကွိုးမှာ စညျးထားပငျမယျ့ မကွာခငျမှာ ပွုတျကသြှားတာက ခပျမြားမြား။ နောကျတော့ လမျးတဈလြှောကျက တှသေ့မြှကလေးငယျတှကေိုပဲ ပွနျဝပေေးလိုကျကွတာပါပဲ။
စုစုပေါငျး ကဖွဈရငျ ခုနှဈရကျလောကျဆကျတိုကျ ကပါတယျ။ မွို့ထဲကိုတော့ နှဈကူးပွီဆိုမှ ဝငျပွီပေါ့။ တဈခွားနဂါးတဈကောငျနဲ့ဖွဈဖွဈ ခွင်ျသတှေ့နေဲ့ဖွဈဖွဈ လမျးမှာဆုံဖွဈရငျလညျး သူနိုငျကိုယျနိုငျအပွိုငျကရတာ မမောနိုငျမပနျးနိုငျ။ ကုက်ကိုငျးဘုံကြောငျးမှာကတဲ့နလေ့ညျး ပြျောရှငျစရာတှပေါပဲ။ ယောကျြားလေးခညျြး အယောကျသုံးဆယျဆိုတော့ တကယျ့ကို ဗရုတျဗရကျလညျး နိုငျလှပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမွငျ့ကအနျပေါငျးထုတျကို ယူရမယျဆိုလညျးလာခဲ့၊ ကြှဲကျောသီးခှဲခိုငျးမယျဆိုလညျး လာခဲ့ ဘကျတူရငျလူမရှေးဘူးဆိုတဲ့ လူတှမေို့ တကယျ့ကို အားရစခေဲ့တာပါ။
နရောသိပျကဉျြးရငျလညျး ကလို့ အဆငျမပွပေါဘူး။ ကကှကျဖျောတဲ့နရောမှာ အရမျးဂရုစိုကျရပါတယျ။ ပိုငျအိုးနီးယားလို နိုကျကလပျရဲ့ အကကွမျးပွငျက ကနြျောတို့ နဂါးအတှကျ မအပျစပျခဲ့ဘူးလေ။ တျောတျောမြားမြားက နိုကျကလပျဆိုတာကို ပထမဆုံးရောကျဖူးကွတာမို့ မကျြလုံးတော့ အကယျြသားကလား။ တကယျတမျးနငျလားငါလား ကလို့ကောငျးတဲ့နရောတှကေ စံပွလမျးမကယျြကွီးနဲ့ ရှသေံလှငျကားဝငျးပေါ့။ ရှဲဖြောကျလို့ ကောငျးမှကောငျး ခဏခဏဖြောကျနတေဲ့ ရှဲဆရာကို မကွာခဏဆဲဆိုနကွေရတော့တာ။
သူတို့တှလေညျးဘာသားတှမေို့လညျး လေးရကျက ငါးရကျကြျောရငျ လကျတှကေ မွှောကျမရခငျြ။ ခွထေောကျတှကေ မကွှခငျြတော့။ ဖိနပျတှထေဲက အရညျကွညျဖုထနတေဲ့ ခွထေောကျတှလေညျး ခဏခဏပေါကျနတော။ ညတိုငျးလိမျးတဲ့ဆေးတှလေညျး မနိုငျတော့။ နတေို့ငျးစားရတဲ့ ထမငျးပေါငျးလညျး မကယျနိုငျတော့။ ကတဲ့လူတှပေဲလားဆိုတော့ ဗုံတီးတဲ့လူလကျမှာလညျး အရညျကွညျဖုနဲ့။ မနကျမိုးလငျးလို့ မကျြနှာသဈရငျကို မနညျးကွှအောငျ မ,နရေတဲ့ လကျနှဈဖကျနဲ့ တကြှတျကြှတျစုပျသပျရငျး မနကျ ၇နာရီအမီဆိုတာကို ကွိုးစားရတော့တာ။
ဒါပမေယျ့ ဗုံသံကွားရငျဖွငျ့ ဆူပှကျလာတဲ့ သှေးတှနေဲ့အတူ မိမိတာဝနျကရြာနရောကို အလိုအလြောကျလှုပျရှားကွစမွဲ။ ကနတေုနျးအခိုကျတော့ ဝဒေနာတှေ မနေ့ပွေနျရောလေ။
ဒီနှဈတော့ ဗုံသံကွားရပွနျဦးတော့မယျ။ ကနြော့ အဖှဲ့နဲ့မြားတှရေ့ငျတော့ တဈပှဲတဈလမျး အကဲတော့ စမျးလိုကျခငျြသား…………
မနကေ့ အိမျကိုရောကျလာတဲ့ လိမ်မျောတဈခွငျးရယျ၊ ရုံးက လိမ်မျောတဈပုံးရယျက ကနြေျာ့ရငျထဲက နဂါးကို လှုပျနှိုးလိုကျတာမို့။
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 5:29 PM 20 comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 1:43 PM 12 comments Links to this post
လူတွေများပြောပါတယ်။ ငါးစိမ်းမြင်ရင် ငါးကင်ပစ်သတဲ့။ ချောင်းကိုပစ်ပြီး မြစ်ကိုရှာတတ်ကြတာချည်းပဲ။ မငြင်းနဲ့ သေချာတယ် အားလုံးအတူတူချည်းပဲ။ ကောင်းမိကောင်းရက် အစကတော့ ကျောလေးကိုင် ရင်လေးသပ်နဲ့ နောက်အသုံးမလိုတော့ ပစ်စလက်ခက်ပစ်လိုက်တာများ သံယောဇဉ်တစ်စက်မှ မရှိတဲ့အတိုင်း။ သူနဲ့ဘာမှ မပတ်သတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်း။ အတိတ်ဆိုတာကို ခပ်လွယ်လွယ် ပြည်ဖုံးကားမချနိုင်တဲ့ ကိုယ့်မှာသာရင်ကွဲပက်လက်…..
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အစကတော့ ကိုင်တွယ်တာကိုက ညင်သာချက်။ ငှက်မွှေးနဲ့ပွတ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ စကားပြောရင် ပါးနားကပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုးလေးလာလာပြောတတ်တယ်။ တခါတလေဆို အနူးအညံ့လွန်ပြီး ကြားတောင်မကြားလိုက်ရဘူး။ ယုယကြင်နာတာတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ ဘယ်သူမှ လိုက်လို့ကှိုမမှီနိုင်အောင်။ ပထမဆုံးညကဆို သူ့မှာပျော်နေလိုက်တာများ ကိုယ်တိုင်တောင် အပျော်တွေကူးစက်ပြီး တော်တော်နဲ့ မအိပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ဟုတ်သေးပေါင်ဗျာ။ သွားလေရာလာလေရာလဲ တပူးတွဲတွဲ။ မပါရင်တောင် ခရီးရယ်လို့ဆက်မသွားဖြစ်သည်အထိ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် ခေါ်တတ်တာ။ ပြီးတော့ လူရှေ့သူရှေ့ဆို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ လက်တွဲပြတတ်သေးတာ။ မမြင်သွားဘူးဆိုရင်တောင် မြင်ရတဲ့အထိ လှည့်ပြီးကို ပြတတ်တာလေ။
ဦးစားပေးဆိုလည်း ထိပ်ဆုံးက။ သူ့အပြင် ဒီ့ပြင်မရှိစေရ။ မျက်နှာတော်တစ်ချက်မညှိုးအောင် ထားတာပါ။ တစ်နေကုန်သူ့အနားမှာပဲနေ။ သူပြောသမျှနားထောင် သူခိုင်းသမျှကို လုပ်ပေးခဲ့တာ။ ထမင်းစားရင်တောင် နောက်ဆံတငင်ငင်နဲ့မို့ အစာအိမ်ဖြစ်မယ် ထမင်းကောင်းကောင်းစားပါဟဲ့လို့ သတိပေးနေရတာ။ ညအိပ်ရင်လည်း လက်ကလေးကိုင်လိုက် ခြေထောက်လေးကိုင်လိုက်နဲ့ ပိုးမွေးသလို မွေးနေတော့တာကိုး။ မိုးလင်းရင်လည်း ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရမှ။
မကြာပါဘူး မကြာပါဘူး တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ်၊ တစ်ပတ်ကနေ တစ်လ၊ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ မင်းသားခေါင်းဆောင်းအောက်က မူရင်းကပေါ်လာတော့တာကိုး။ ဆီလိုအပေါက်ရှာ အပြစ်မြင်လာတော့တာပါပဲ။ အနားကပ်ပြန်ရင်လည်း ပူတယ်ဖြစ်ပြန်ရော။ စကားတွေအရင်လို ပြောပြန်တော့လည်း နားညည်းပြန်သတဲ့။ အလုပ်ကပင်ပန်းရတဲ့ အထဲ အနှောင့်အယှက်ကလည်း ပေးသေးတယ်ဆိုပဲ။
ယုယုယယကိုင်တွယ်ဖို့နေနေသာသာ တွန်းဖယ်ပြီးတော့ကို နေတော့တာ။ ခေါ်လို့များ ထူးသံကို ကြည့်ပါဦး ဘာတုန်းတဲ့။ မေ့ချင်လည်းမေ့ ထားချင်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်သလိုကို ထားခဲ့တော့တာ။ ကျီးထိုးထိုး ခွေးစားစားဆိုပါတော့။ သူ့ဘက်ကအသုံးမလိုမချင်းလေ။
ညအိပ်တော့လည်း ဝေးဝေးမှာနေတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်အသံမထွက်နဲ့ မလှုပ်နဲ့ဆိုပဲ။ အသံလေးများထွက်လိုက်ရင် အိပ်ရေးပျက်တယ်ကွာ အလုပ်ရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီး အော်ညည်းတတ်သေးတာ။ အားမနာပါးမနာနော်။
သူများကို လက်တွဲပြဖို့နေနေသာသာ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကို မထွက်ရတာ။ အလုပ်လုပ်ချိန်လေးတောင် မတတ်နိုင်လွန်းလို့သာ လူရှေ့က ဖြတ်ခွင့်ရတာ။ ပြီးရင်မာန်မဲတာခံရမလားမသိဘူး။ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘူးဆိုပြီးလေ။
အမှားများလုပ်မိလို့ကတော့ မျက်နှာညိုပုပ်ပြီး ဆောင့်အောင့်တော့တာပါပဲ။ ဒါလေးတောင်မှားရသလား ဒါလောက်တောင်မသိဘူးလား မလုပ်ပေးနိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးလေ။ ငှက်မွှေးကနေ ကျားလျှာအကူးအပြောင်းက တကယ့်ကို ခံရခက်လွန်းပါတယ်။
နောက်တော့ သူကပဲ စကားစပြောလာတယ်။ လမ်းခွဲကြရအောင်တဲ့။ ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ မကြည်ဖြူတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ သူနဲ့ ဘယ်လိုဆက်နေရမှာလဲ။ သူ့နှလုံးသားမှာမှ မရှိနိုင်တော့တာ။ ဖက်တွယ်ထားလို့လဲ အပိုပါပဲလေ။ သူကပြောသေးတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ မင်းအတွက်ကောင်းမယ်ထင်တာလေး ငါစီစဉ်ပေးလိုက်မှာပါတဲ့။ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးလှဖို့ မင်းမပူပင်ရအောင်တဲ့။
ရက်ရက်စက်စက် သူများနောက်ကို ထည့်ရက်လိုက်တာ။ သူမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တောင် သူ့အနားမှာ အရိပ်လေးပဲမြင်ရမြင်ရ အသံလေးပဲကြားရကြားရ ရနံ့လေးပဲရှူရရှူရ ရသေ့စိတ်ဖြေလေးတော့ နေမဟဲ့ဆိုပြီးအားခဲထားမိတာ။ အခုတော့ ငါစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားလိုက်ပါတဲ့။ ကောင်းစေချင်လို့စီစဉ်တာပါဆိုတော့ ဘယ်လိုငြင်းရတော့မလဲ။ ချည်ပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်နေပြီလေ။
အခုလည်း နောက်တစ်ယောက်က သူနဲ့စတွေ့တုန်းကလိုညင်သာတဲ့ အကြင်နာတွေနဲ့ ကယုကယလုပ်နေပြန်ပြီ။ ဘယ်နေ့မှာတော့ အချစ်တွေမမြင်ပဲ အပြစ်တွေဝင်မလဲဆိုတာ စိုးထိတ်နဲ့တိုးတ်ိတ်ကြောက်လန့်နေရတော့တာ…..
Sony Ericsson မှသည် Nokia အကူးအပြောင်းအမှတ်တရ
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 12:41 AM 17 comments Links to this post
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအရာတဲ့လဲ။ ပေးဆပ်ခြင်း ရယူခြင်း အိုး ပြောမကုန်နိုင်တဲ့ ဖွဲ့ဆိုခြင်းတွေအောက်မှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုယ်တိုင်ကော သူ့ကိုယ်သူ သိရှိနိုင်ရဲ့လား။
ငြိမ်းရဲ့ ဘ၀မှာ အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ ဘ၀အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ ငြိမ်းယူဆခဲ့တယ်။ တစ်ချို့အရာတွေအတွက် ငြိမ်းမှားကောင်းမှားလိမ့်မယ်။ ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးအပြစ်တွေ ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းပျော်ပါတယ်……………
ကျနော့အတွက်တော့ တစ်ဘ၀လုံးစာ သူ့ကိုချစ်ခဲ့တာ။ သူလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ အရာတွေ အားလုံးအတွက် ကျနော်ကြိုးစားခဲ့တာ။ တကယ်တမ်းကျနော် သတိလွတ်သွားမိတာက သူလိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဘေးနား ကျနော်ရှိမနေခဲ့တာပါ………
တောင်ပံနှစ်ဖက်ကို စုံခတ်ပြီးပျံသန်းကြတဲ့အခါ တောင်ပံတွေ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် မမြင်ရတတ် မကြင်ရတတ် ပါဘူး။ ရပ်နားပြီဆိုမှသာ ရင်ဘတ်ရှေ့ယှက်ပြီး သူတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိတွေ့ခွင့်ရတတ်ကြတာ။ စုံခတ်ပြီဆိုရင်ဖြင့် ဆုံနိုင်ခွင့်တွေနည်းခဲ့ပြီဆိုတာ သိပ်သေချာနေပြီလေ။
ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငြိမ်းနဲ့မင်းညိုဆိုရင် မသိသူမရှိသလောက်ပါပဲ။ သီရေတာတွေ တစ်လျှောက် ပေါက်နေတဲ့ မြက်ပင်လေးတွေကိုတောင် မေးကြည့်လို့ရနိုင်ကောင်းတယ်။ သစ်ပင်တွေအားလုံးက ပြုံးကြည့်နေကြရတဲ့ ဒီနှစ်ယောက်ကို တစ်ကျောင်းလုံးကလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ချစ်ကြတယ်လို့ အများကသတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းက သူတို့အတွက်များလေလား။
နောက်ဆုံးနှစ်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ဇာတ်ခုံမှာ အလျင်းသင့်သလို ၀င်ရပြီပေါ့။ ဇာတ်ဆရာရယ်မင်းအလိုကျ ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုသလို တောင်ပံနှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့။
နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀တည်ဆောက်ဖို့အတွက် မင်းညိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဟိုးအဝေးမှာ စီးပွားရှာထွက်ခဲ့တယ်။ ငြိမ်းဘ၀ကို လှပစွာတည်ဆောက်ပေးချင်တယ်တဲ့လေ။ ဝေးလံတဲ့အရပ်ဒေသမှာ မိဘအတွက် ငြိမ်းအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အရာအားလုံးကို မင်းညိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငြိမ်းရယ် ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့် ရှေ့ရေးဆိုတဲ့ အိပ်မက်နဲ့ ကိုယ်အရာရာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့လေ။ ရပ်ဝေးဒေသရဲ့ အခက်အခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေအားလုံးကို ခါးစည်းကြိတ်မှိတ်လို့လေ။
ငြိမ်းဆိုတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ကောင်မလေးအတွက် နောက်ထပ် ပညာတွေဆက်သင်ကြားခွင့်ရလိုက်တယ်တဲ့လေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မင်းညိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ တစ်နေရာထဲမှာ နေချင်လိုက်တာလို့ တဖွဖွပြောနေပင်မယ့် တစ်ချို့အရာတွေက ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလေ။
ဘ၀ဆိုတဲ့အရာကို အလျားလိုက်ဖြတ်သန်းသင့်သလား ဒေါင်လိုက်ဖြတ်သန်းသင့်သလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကြုံရာကျရာ ပေါ့။ ငိုဆိုငို ရယ်ဆိုရယ်….
ကျောင်းတက်ရပြီဆိုတော့ ကျောင်းရဲ့ ဗာဟီရတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခက်နေခဲ့ပြီပေါ့။ စာမေးပွဲ အကြီးအငယ်တွေနဲ့ အနားနားမှာ ပတ်ချာလည် လို့။ ရွာစားတစ်ယောက်လို ဗုံတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ဘယ်အပိုင်းကို စတီးရမှာပါလိမ့်။ နေရာဒေသ အကျွမ်းဝင်ဖို့ ဘာသာစကား အခက်အခဲ ကျောင်းစာတွေရဲ့ နက်နဲမှု။ ငြိမ်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် တကယ့်ကို စွန့်စားခန်းကြီးလို။
တကယ်တမ်း ဒီခြေလှမ်းကို လှမ်းတော့ သမရိုးကျခြေလှမ်းလေးလို့ပဲ အများကသတ်မှတ်ကြတာ။ လိုအပ်လို့လဲ လှမ်းခဲ့တာပါလေ။ မလှမ်းလို့မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ နောက်တော့ ကိုယ်လှမ်းမိတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ နောက်က ခြေရာတွေကို ပြန်မကောက်ခဲ့မိဘူး။ ခြေထောက်မှာ ဗွက်တွေစင်မှ သတိထားမိတယ်။ ရွှံ့ဗွက်ထဲကို လျှောက်နေမိပါပကောလား။ နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုတော့ အလယ်တည့်တည့်ရောက် နေမိပြန်တယ်။
မင်းညိုကြားနေရတယ်။ ငြိမ်းရယ် ခြေလှမ်းတွေ ပျက်နေသတဲ့။ ရင်တွေ ဆယ်နေလိုပူပင်မယ့် ငြိမ်းကို ယုံကြည်တယ် စိတ်ချတယ်လို့ ပြောရင်း အားတင်းမိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တည်ဆောက်လာကြတဲ့ နားလည်မှုဆိုတာ ကာလတိုမျိုးမှမဟုတ်ခဲ့တာ။
ငြိမ်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်က စကားတင်းဆိုကြတယ်။ ဘေးနားက မေးငေါ့ကြတယ်။ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်အတွက် အထူးသဖြင့် သူ့ဘ၀ကို အဝေးကနေကြည့်ပြီး ဝေဖန်မယ့်လူတွေအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိတယ်မဟုတ်ပါလား။ မင်းညိုရေ ငြိမ်း…စိတ်ညစ်နေပြီ…
ငြိမ်း ဒီစာကိုရေးဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေရတယ်။ စာရွက်ကို ဖြန့်လိုက် ဖောင်တိန်ကို ရမ်းလိုက်နဲ့ တမနက်ခင်းလုံးကုန်နေခဲ့ပြီ။ စာရွက်ကိုင်လိုက်တိုင်း သိသာစေတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ရဲ့ တုန်ခါမှုအောက်မှာ နှလုံးသားလည်း ဆတ်ဆတ်ခါနေခဲ့တာပါ။
ဒီစာကိုလွယ်လင့်တကူရေးထွက်ရက်တယ်လို့ အပြစ်မဆိုပါနဲ့နော်။ ဒီကသတင်းတွေကို နင်လည်းကြားမှာပါ။ ငါမငြင်းရဲသလို ဖြေရှင်းချက်လည်း မပေးပါရစေနဲ့တော့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါ့ကို နင့်ဘ၀ထဲက ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့။
ဒီစာကိုဖတ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီးသားပါ။ တစ်နေ့နေ့တော့ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ပေါ့။ ငြိမ်း….ငါနင့်ကို အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ အရာအားလုံးကို ငါလက်ခံလိုက်ပါပြီ။ လောကမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုး။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ပုံမှန်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်မှုအများဆုံးပေါ့။ ကာယကံရှင်တွေကြောင့်လား ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား ဆိုတာ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကနေမှသာ သိမြင်နိုင်တာပါ။ တစ်ဖက်တည်းကြည့်ပြီး အမှားအမှန်ကို မဆုံးဖြတ်ကြစေချင်ဘူး။ တကယ့်ကို နားလည်မှုကြီးစွာနဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ရင်ကော။ ခတ်နေတဲ့ တောင်ပံတွေ ဆုံနိုင်ခွင့် ရှိပါစေလို့သာ ဆန္ဒပြုနေမိတော့တာ…..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 3:23 PM 8 comments Links to this post
အဲဒီမြို့လေးက ကျနော့မြို့လေးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမြို့လေးကို ကျနော်ချစ်ခဲ့တယ်။ မြို့ကလေးကိုယ်တိုင်ကိုက ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တာ။ တကယ်…
အဲဒီမြို့လေးကို အမှတ်ထင်ထင်ရှိသွားတာ ကိုးတန်းအောင် ဆယ်တန်းမတက်ခင်ပေါ့။ ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အိမ်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ ဒီမြို့လေး ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲ တိတ်တိတ်လေး ၀င်နေခဲ့တာ။ မြို့အ၀င်လေးမှာ ဘုရားလေးတစ်ဆူရှိတယ်။ ဘုရားအောက်ခြေနားက စက်ကန်တွေကလည်း လွမ်းဆွတ်ဖွယ်။ ဒီဘုရားလေးနဲ့ ဒီစက်ကန်တွေမှာ ပုံပြင်တွေရှိတယ်လေ။ ဘုရားလေးပေါ်ကနေ ရှုခင်းတွေကို မျှော်ကြည့်မိရင်း နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ အဲဒီချစ်ဇာတ်လမ်းကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်မိတတ်တယ်။
လမ်းကလေးတွေကလည်း တကယ့်ကို မြတ်နိုးဖွယ်။ သစ်ပင်သစ်ရွက်တွေနဲ့ ဝေလွင်နေလေရဲ့။ ကျနော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပထမဆုံးဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်ထဲက မြို့လေးကို အပြင်မှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့လိုက်ရတာလေ။ ရွက်ကြွေတွေ တွေ့တိုင်း ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေ ကျနော့အနားရောက်လာသလို ခံစားရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရွက်ဝါကြွေတွေကို ဖယောင်းတိုက်ပြီး ကျနော်မသိမ်းခဲ့ပါဘူး။
ကျနော်တို့နေတဲ့ ရေနံဝင်းထဲက အထွက်ပေါက်မှာ နေ့လည်တိုင်း ငှက်ပျောသီးကောက်ညှင်းထုတ်သွားစားရတာကိုလည်း ကျနော်ကြိုက်ပါတယ်။ ရေနံဝင်းထဲက အိမ်ကြီးတွေကလည်း ပုံပြင်ထဲက အိမ်ကြီးတွေလို ရှိနေတတ်တယ်။ အခန်းတွေ အများကြီး ဖွဲ့စည်းမထားတဲ့ အိမ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ အိမ်ဝန်းကျင်က စားပင်သစ်ပင်တွေက တကယ့်ကိုလိုက်ဖက်နေပြန်တယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းဖို့ ဖေ့ကို ပြောတိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပျက်သွားရတတ်တယ်။ ဒီမြို့လေးက ကျနော်နဲ့ အဝေးမှာပဲနေချင်ဟန် တူပါရဲ့။
သူငယ်ချင်းက ဆယ်တန်းအတွက် ကျူရှင်တွေတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်က ခက်ဆစ်လေးတွေ ကျက်ရင်း မြို့လေးနဲ့ ရင်းနှီးဖို့ ကြိုးစားမိတယ်။ သူမနက်စောစော သွားရတဲ့ အချိန်တိုင်း မြို့လေးက လမ်းတွေကို လမ်းလျှောက်ရင်းပေါ့။ ဆယ်တန်းမှာ မက်တဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဒီမြို့လေးလည်း ပါနေတတ်တယ်လေ။ အိပ်မက်ဆိုတာ မပီပြင်ဝိုးတ၀ါးပါပဲ။
ညနေဖက် သူငယ်ချင်းကျူရှင်က ပြန်လာရင် ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စက်ဘီးတစ်စင်းနဲ့ ပတ်နေမိပြန်ရော။ လမ်းထိပ်က ရေခဲသုပ်ရယ် ကြံရည်ရယ်တစ်လှည့်စီ နဲ့ မြို့ကလေးက အချောအလှတွေကို ငေးရင်း သံစဉ်တွေ တိုးတိတ်ဖွဲ့ဆိုတတ်တယ်။ အပြန်လမ်းကတော့ ပြန်နေကြ ကောင်စီလမ်းကပဲပေါ့။ ကောင်စီလမ်းထဲမှာ ကျနော့သူငယ်ချင်းရဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုပဲ။ တစ်ခါမှ မတွေ့ရတတ်ပင်မယ့် တစ်ရက်မှ လမ်းထဲက ဖြတ်ပြန်ဖို့ကို မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူးလေ။
ဆယ်တန်းတက်ဖို့အချိန်ကျလာတော့ ခဏတဖြုတ်သွားခဲ့တဲ့ မြို့လေးကနေ ကျနော်ခွဲခွာလာရတယ်။ ဧည့်သည်ဆိုတော့ အချိန်တန်ရင် ပြန်ရပြီပေါ့။
နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ မကြာခဏ မြို့ကလေးဆီကို ရောက်ဖြစ်တယ်။ အရင်လို ရက်ကြာရှည်နေဖို့ တစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ဘူး။ အခေါက်တိုင်း သုတ်သီးသုတ်ပြာနဲ့ ပြန်ခဲ့တာချည်းပဲ။ တခါတလေလည်း မိုးကြီးချုပ်မှ အစ်ကို့ကို ဂျီကျပြီးလိုက်ပို့ခိုင်းတတ်တယ်။ တစ်ညသား ကားပျက်ပြီး လမ်းတ၀က်နေ ကားကြုံနဲ့ အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ရဖူးတယ်။
မြို့ကလေးက ကျနော့ဇာတိမြို့လေးလည်း မဟုတ်ပါဘဲ ဘယ့်နဲ့ကြောင့် စိတ်ထဲစွဲနေရတာပါလိမ့်။ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ အတတ်တွေနဲ့ များ ဖမ်းစားထားလေသလား။ တစ်ခုခုတော့ ဆက်စပ်နေမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီမြို့လေးကို ယနေ့ထက်ထိ ကျနော်မေ့လို့မရသေးလို့ပါ………………………
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 10:38 AM 16 comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 11:51 PM 14 comments Links to this post
တကယ်တမ်းက နှစ်နာရီခွဲသာသာ ခရီးလေး။ ခဏတာဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ဒီခရီးက ပြီးသွားနိုင်တာ။ ဒါပေမယ့် ဒီခရီးအတွက် စခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ နိုဝင်ဘာထဲက။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ရှိနေတုန်း။
လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ရခက်တယ်ဆိုလို့ နိုဝင်ဘာထဲက ဆိုင်တွေကို ဖုံးဆက်။ တော်တော်နဲ့မရဘူးလေ။ Booking တင်ရုံနဲ့ မရနိုင်ဘူးတဲ့ ပိုက်ဆံသွင်းပေးပါဆိုတော့ ကဲ လာလေရော့ပေါ့။ နောက်တစ်ရက်ကျတော့ တင်ထားတဲ့ နှစ်ရက်လုံးကျပါပြီ လက်မှတ်လာထုတ်ပါတဲ့။ မြန်သားကလား။ အင်းငွေမျက်နှာတော်တော်ကြီးတာကိုး။ စောနေတဲ့ တစ်ရက်ကို ပြန်ဖျက်လိုက်မိတယ်။ အခုတော့ပြန်လိုချင်နေပြန်ရော။ ရတုန်းက မယူထားမိတာ နာလိုက်တာဗျာ။ နို့မို့ဆို တစ်ရက်စောပြီး ပြန်ရောက်နေမှာ။ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံက မနည်းပေမယ့် ပြန်ရလိုက်တာက တကယ့် စာရွက်အပိုင်းလေးရယ်ပါ။ ပျောက်သွားရင် ပြန်ထုတ်ပေးဦးမတဲ့။ E ticket ဆိုသကိုး အဲ့လို။
လေယာဉ်လက်မှတ်ပြီးပြန်တော့ ဟိုက ဒီက မှာတဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ အတိုအထွာလေးတွေ။ ကိုယ့်ဘာသာလည်း ကောင်းနိုးရာရာ အသုံးတည့်မယ်ထင်တာလေးတွေ ဘယ်သူ့အတွက် ဘယ်ဝါ့အတွက် ဆိုပြီးဝယ်နေမိပြန်ရော။ ဒီမနက် ဖုံးဆက်တဲ့အထိကို မှာကြတုန်း။
ပြီးတော့ ပေးစရာရှိလေတဲ့ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်း။ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့လေးတွေခြစ်ခြုပ်ပြီး ပေးစရာရှိတာပေးပေါ့လေ။ အလုပ်ထဲက အသိတစ်ယောက်ပြောသလို ၀င်တာက တစ်ခါတည်း ထွက်တာက သိပ်များတာပဲဆိုသလို။ အင်း…ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သား လခထုတ်ပြီး အားလုံးနှုတ်လိုက်ရင် လက်ကျန်က မရှိတော့။ ယူထားမိတဲ့ အကြွေးတွေက အကြွေးပူမဟုတ်လို့ တော်ပါသေးရဲ့။ မဆပ်နိုင်ရင်တော့ နောင်ဘ၀မှပဲ ဆပ်တော့မယ်လို့ ပြောရတော့မှာပါပဲ။
ဟိုက သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဘယ်လိုလဲ အိမ်တန်းပြန်မယ်ဆိုလို့ စိတ်မကောင်းကြဘူး။ သူတို့အတွက် အချိန်ပေးစေချင်ကြတယ်။ ခရီးတို ခရီးရှည်များလဲ သူတို့နဲ့ ထွက်စေချင်တယ် ထင်ပါရဲ့။ Platform ပေါ်က သူငယ်ချင်းကလည်း IC ပွဲရှိတယ် သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး လှမ်းချိန်းနေပြန်သေး။ မကြည့်ရတာလည်း ကြာတော့ ကြည့်တော့ကြည့်ချင်သား အရင်က ဗေထိဆို ရှေ့ကဖြစ်နေကြလေ။
ဖေက ခွင့်မရလေတော့ အလုပ်ကိုတန်းပြန်ရဦးမယ်။ မိသားစုတွေ့ဆုံပွဲနဲ့အတူ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခု ထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားကြလေရဲ့။ မွေးရပ်မြေကိုလည်း တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖြစ်အောင် ပြန်ချင်သေးတယ်။ အဖွားဆုံးပြီးကတည်းက ပြန်မရောက်တော့တာ နှစ်ကာလ ကြာရှည်ခဲ့ပြီ။ ပျက်စီးနေတဲ့ ဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကိုလည်း မကြည့်ချင်တော့တာပါလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပြန်ပြင်ပေးချင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ။ စိတ်ထဲမှာပဲတေးထားရတာလေ။ ဥုံဖွလို့ လုပ်လို့ရရင်လည်း ကောင်းမိကောင်းရဲ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံးနဲ့ ပြန်ဆုံချင်မိတယ်။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ပြီဆိုတော့ တစ်နှစ်ခွဲစာ စကားတွေပြောဖို့ ရှိနေရင်ရှိနေမှာလေ။ တစ်ချို့ဆို အဲဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ ပျောက်ကွယ်သွားကြပြီ။ ဖြစ်ပျက်တွေက သိပ်များတော့ up-to-date လုပ်ရဦးမှာ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်တော့ ပျောက်ကွယ်မလဲမှ မသိနိုင်တာ။
ယူစရာ၊ သယ်စရာရှိတဲ့ စာရွက်စာတမ်းကနေ စပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်ရဦးမယ်။ မပြီးသတ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း ပြတ်အောင် လုပ်ရမယ်။ မှာစရာတွေ မှာရဦးမယ်။ လွှဲစရာရှိတာတွေ လွှဲဖို့ ပြင်ဆင်ရသေးတယ်။
ပြီးတော့ ဒီဘလော့လေး။ အရိပ်တကြည့်ကြည့် တမြတ်တနိုးနဲ့ စက္ကန့်တိုင်း နာရီတိုင်းလောက် စောင့်ကြည့်နေမိတဲ့ ဒီဘလော့လေး ကျနော့ ရင်လှိုက်ပိုးလေးလေ။ ဘယ်လိုထားခဲ့ရမလဲ။ ဟိုမှာတော့ ပြန်ဖွင့်လို့ရပြီဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ယက်တွေနဲ့ ဝေးလံလွန်းတဲ့ ကျနော့ရွာလေးမှာ ဘလော့ဂင်းလို့ ဘယ်ရမှာလဲ။ ကျနော်စာတွေရေးနေတယ်လို့ ပြောရင်တောင် ဖေနဲ့မေက ရီကြမှာ။ သူတို့ကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲတောင်မသိ။ သူတို့အကြောင်းတွေ ဒီလိုရေးနေတာသိရင် လက်ခံပါ့မလား။
တစ်နာရီခွဲနဲ့ ပြီးဆုံးသွားမယ့် ဒီခရီးလေးကို ရက်ပေါင်းများစွာကြာသည် အထိ ညတာတွေရှည် အိပ်မက်တွေများနေမိတာ။ တကယ်တမ်းတော့ တကယ့်ကို ခဏလေးပါ ခဏတာလေးပါ…………
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 4:20 PM 12 comments Links to this post
ခရီးသှားတဲ့ အကွောငျးကို မရေးဖွဈတာကွာပါပွီ။ ခရီးတှေ သှားဖို့စီစဉျရငျး အမှတျတရ ခရီးစဉျ တဈခုကို ပွနျတှေးမိပွနျရော။ မရှယျဘဲစျောကဲမငျးဖွဈသလို မစီစဉျပါဘဲ သှားဖွဈခဲ့တဲ့ ခရီးစဉျတဈခု ပွီးတော့ တကယျဗရုတျဗရကျနဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉျတဈခုပါ။
တောငျကွီးက အမြိုးတှေ နှရောသီအပငျြးပွဆေငျးလာကွတုနျးပေါ့။ ၇တနျးဖွအေပွီး ၈တနျးအတကျကာလ။ ထုံးစံအတိုငျး အနောကျဖကျကမျးကို သှားကွဖို့စီစဉျတော့ နလေ့ညျ ၁၁နာရီထိုးရော့မယျ။ အစကတညျးက ညောငျပငျအိုငျဆရာတျောကို ဖူးမယျ ပွီးတော့ ဖိုးဝငျးတောငျ ရှဘေတောငျကိုကူးမယျပေါ့။ ညောငျပငျအိုငျကိုရောကျတော့ ဆရာတျောဆီက သကျသကျလှတျကို မလှတျတမျးစားဖွဈခဲ့သေးတာ။ အဲဒီအခြိနျ ဆရာတျောက ၀စီပိတျကငျြ့နတေယျထငျပါတယျ။ ဆရာတျော တရားကငျြ့တဲ့ ဂူကိုလညျး စပျစပျစုစု ရောကျဖူးတယျရှိအောငျသှားခဲ့သေး။
သိပျကိုလှတဲ့ ရှဘေတောငျတဈလြှောကျ ငေးနဖေို့ လကျမနှေးခဲ့ပွနျဘူး။ ကြောကျတောငျတှကေို ထှငျးထားလိုကျကွတာ။ ဓါတျပုံတှရေိုကျလို့ကောငျးတဲ့နရောဆိုတာ သခြောတယျ။ ဘုရားပုထိုးတှေ သိပျမြားတဲ့ မွဆေိုတာ မငွငျးနိုငျအောငျ ဖိုးဝငျးတောငျက ပွနတေော့တာကိုး။ အရမျးကိုဆော့တဲ့ မြောကျတှကေလဲ တောငျကွောတဈလြောကျ တှဲလောငျးခို။ ကနြျောတို့ရောကျတော့ တောငျပျေါကမဆငျးတာမို့ မြောကျစာရောငျးသူတှမှော သူတို့ ကြေးဇူးရှငျတှကေို တကွျောကွျောချေါလိုကျရတာ။
ဖိုးဝငျးတောငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးက အဆငျးမှာ ဒီခရီးဆကျဖို့ အစပွုတော့တာ။ အစတညျးကနခေ့ငျြးပွနျခရီးမို့ အဝတျအစားပိုလညျးမပါ။ ပိုကျဆံလညျး သိပျမြားမြားစားမထညျ့ခဲ့။ တောငျကွီးကလူတှကေ မပူပါနဲ့ လိုကျသာလိုကျခဲ့ ရောကျဖူးတယျ ရှိအောငျ သှားမယျလဆေိုတော့ မငွငျးနိုငျကွဘူးလေ။ ဘယျသူမှ မရောကျဖူးတာမို့ လညျးပါသပေါ့။ သင်ျကွနျမတိုငျမှီ အိမျပွနျရောကျပွီးရောဆိုပွီး။
ညဖကျအေးအေးလူလူ ခရီးဆကျခဲ့ကွတယျ။ ခရီးရှညျလာတာနဲ့ အမြှ ပူပွငျးမှုက သိသာလာတယျ။ ရှာတှရှေိပမေယျ့ ရရှေားဒသေဆိုတာကိုး။ နောကျတော့ ရလြှေံတှငျး ကိုးဆယျ့ကိုးခုဒသေကို ဖွတျတော့ ရခြေိုးခငျြလို့ ကလေးတှေ အားလုံးဂြီကတြော့ ခဏရပျပွီး အဲဒီတှငျးတှနေားမှာ အေးမြှတဲ့ ရကေို ခြိုးခဲ့ကွသေးတာ။ ထမငျးဆိုငျရှာရတာ အိမျသာရှာရတာကလှဲရငျ ကနျြတာအိုကေ။
တဖွညျးဖွညျး တောကလညျးနကျလာတယျ။ ဒီဒသေက နယျမွကွေမျးသလို တောကောငျတှလေညျး ရှိတတျတယျတဲ့။ သင်ျကွနျစကနြပွေီဆိုတော့ ရှာတှကေ ရထှေကျပကျကွတယျ။ အပိုမပါတဲ့ ဝတျစုံတှေ ရစေိုလိုကျပွနျခွောကျလိုကျပေါ့။ တောထဲဝငျခါနီး နောကျဆုံးရှာ ဖွဈတဲ့ ကပိုငျရှာ(ဒီရှာပွီးရငျ လူနအေိမျခွသေိပျမရှိတော့ဘူး) အဝငျမှာတော့ ကားဘီးထဲက မီးခိုးတှထှေကျလာတယျ။ သူတို့ရှာကလညျး ကလေးတှေ ဝါးလုံးနဲ့ကားကိုတားပွီးရပေကျကွတာ။ ကားမှနျဖှငျ့ပွီး ကားဘီးကို ရပေကျပေးပါပွောဖို့ကွိုးစားတာ ဘယျလိုမှကို မအောငျမွငျဘူး။ ခေါငျးထှကျတာနဲ့ မကျြနှာကိုရနေဲ့ ဝိုငျးပကျကွတာ။ စကားပွောခှငျ့ကိုမရှိခဲ့ဘူး။ နောကျဆုံးကားထိုးရပျတဲ့နရောက တရှာလုံးကိုရဝေနေတေဲ့ ရစေကျအရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ။ အဲဒီတော့မှ တရှာလုံးထှကျပွီးကားကို ရလေောငျးကွတော့တာ။
ကားပွနျကောငျးပွီဆိုတော့ ရှာထဲက လူကွီးတဈယောကျက အလောငျးတျောကဿပ ဆငျစခနျးကိုလိုကျခငျြပါတယျဆိုတာနဲ့ ချေါခဲ့ရပါတယျ။ သူက ကလေးတှေ စကားပွောဆငျခွငျပါနဲ့ တတှတျတှတျပွောရငျး နောကျတဈခါကား ပကျြရငျပူစရာမလိုဘူးတဲ့။ သူ့စခနျးကဆငျတှနေဲ့ ဆှဲခိုငျးမယျဆိုပဲ။ မကွာပါဘူးကားက တျောတျောလေးတောနကျထဲသှားအပွီးမှာ ထိုးရပျသှားပါတော့တယျ။ မှောငျစကလညျးပြိုးလာပွီ။ ကားပျေါပါလာတဲ့ အရေးပျေါမီးခြောငျးကို ထှနျးထားရငျး လမျးဘေးမှာ ရပျနရေတယျ။ ကလေးငယျတှကေတော့ အိပျငိုကျနပွေီလေ။ လူကွီးတှကေ တောကောငျတှရှေိတဲ့ အရပျမို့ စိုးရိမျစပွုလာပွီ။ လူနအေိမျခွလေညျးမနီး ဘယျလိုမှဆကျသှယျအကူအညီတောငျးစရာလညျး မရှိတာမို့ တကယျ့ကို အတိဒုက်ခနဲ့ပေါ့။
ဘုရားတရားကြေးဇူးကွောငျ့ထငျပါရဲ့ ဟိုးတဈမိုငျနှဈမိုငျလောကျမှာ လူသံကားသံကွားလာရတယျ။ တကယျတမျးဒီလမျးကို ညဘကျ ဘယျသူမှမလာနိုငျဘူးလေ။ အဈကိုက ပွေးသှားပွီး အကူအညီတောငျးရှာတယျ။ ရှာလူကွီးရဲ့ ခွောကျတောငျ့ထိုးဓါတျမီးကွီး ပါလာလို့တျောပါသေးရဲ့။ ထူးဆနျးတိုကျဆိုငျစှာရောကျလာတဲ့ ကားက လမျးပွငျတဲ့အဖှဲ့ကားပါ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ပကျြနတေဲ့ ကားကိုဝိုငျးဆှဲကွရငျး ကပိုငျရှာကို နောကျပွနျဆုတျခဲ့ရတာ။
ရှာအထိရောကျအောငျမသှားပဲ ရှာအထှကျက သဈစခနျးမှာကနြျောတို့ကိုထားခဲ့တယျ။ လူတဈယောကျပဲရှိတဲ့ သဈစခနျးကယျြကွီးထဲမှာ ကနြျောတို့တှေ တညျးခိုခဲ့ရပါတယျ။ ပကျြသှားတဲ့ ကားအငျဂငျြကိုပွငျနိုငျတာ ညောငျပငျကွီးက စကျဆရာတှပေဲတတျနိုငျတယျဆိုလို့ ညောငျပငျကွီးကို ကားကွုံနဲ့ အဈကို့ကိုလှတျလိုကျရတယျ။ ရှားပါးတဲ့တောရှာကွောငျ့လား သင်ျကွနျရကျတှငျးမို့လား စြေးဆိုတာ မရှိတာမို့ ကနြျောတို့အဲဒီရကျအတှငျးမှာ မငွီးမငှစေ့ားနရေတာက ပဲပုတျခကျြ ပဲပုတျကွျော တဈလှညျ့စီလေ။ အိပျလို့ကောငျးလိုကျတာမပွောပါနဲ့တော့။
ညောငျပငျကွီးက စကျဆရာတှကေားပွငျနတေုနျးမှာ စကျဆရာတှခေျေါလာတဲ့ ကားနဲ့ ကနြျောတို့ ခရီးဆကျခဲ့ပွနျတယျ။ စိတျတော့မလြှော့သေးဘူး။ လမျးတဈလြှောကျ ခြောငျးတှကေို အဖွတျမှာ ခရီးသှားကားအခငျြးခငျြး ဘေးခငျြးကပျရပျပွီး ခြောငျးရနေဲ့ပကျကွတာ တဈမြိုးတော့ ပြျောစရာကောငျးတယျ။
နာမညျကြျောတဲ့ ပွာပုံ၁၂ကှကေ့လညျး ကြျောလောကျပါပတေယျ။ လမျးဘေးဝဲယာက အုပျဆိုငျးစိမျးစိုတဲ့ သဈတောရယျ ကြေးငှကျသံတှရေယျတကယျ့ သာယာနာပြျောဖှယျပါပဲ။ သဈပငျမွငျ့တှဆေီက သဈခှပငျတှကေိုလညျး ကားရပျတိုငျး ခူးခိုငျးရတာ မနားတမျး။ ခွခေစြရာမရှိတော့ပွီဆိုမှ ရပျတော့တာ။
အနီးအနားရှာတှကေ အဲဒီခရီးကို ခွကေငျြသှားကွတာတဲ့။ သှားလိုကျကွ နားလိုကျကွ စားလိုကျကွနဲ့ တျောတျောပြျောစရာကောငျးမယျ့ပုံပါပဲ။ ခုနောကျပိုငျးလညျး ပှဲတျောခြိနျဆို သှားနကွေတုနျးလို့ဆိုပါတယျ။ တဈယောကျစနှဈယောကျစတော့ အထုပျလေးတှေ ခေါငျးပျေါရှကျတာတှရေ့တတျတယျ။
တောတောငျအရိပျမှာ မငျသကျရငျး ဆငျစခနျးကိုရောကျခဲ့ရတယျ။ စီးဖူးတယျရှိအောငျစီးကွမယျ ဆိုပွီး စငျပျေါကနစေောငျ့ကွရတယျ။ ကနြော့တို့ ဆငျကအမ,လေးဗြ။ ပွီးတော့ နာမညျက ခဈြစနိုးပေးထားတာ စိုးမွတျသူဇာတဲ့။ ဆငျမယဉျသာဆိုတဲ့အတိုငျး အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ တောလမျးလေးတဈလြှောကျ သှားရှာတယျ။ ဗွုနျးဆို မှီထားတဲ့ နောကျကြောက သဈပွားက ပွုတျထှကျသှားသေးတယျ။ အောကျမြားကသြှားလို့ကတော့ ဆငျနငျးခံရရငျ တျောတျောအညောငျးပွသှေားမယျ။ ကံကွီးတယျချေါရမလား လုံးလုံးမမှီရသေးခငျ ပွုတျသှားလို့။
အပျေါကဘုရားကို ဦးခပြွီး အောကျထဲကိုဆငျးဖို့ပွငျဆငျကွတယျ။ လှကေားတှကေ ရတှေကွေောငျ့လား ရညှေိတှတေကျလို့။ လငျးနို့ခြေးနဲ့ကလညျး လအေဝှမှေ့ာ ဘယျလိုမှရှောငျလို့မရ။ ဆငျးလိုကျတကျလိုကျအပွီးမှာ ကြောကျတံခါးရှကေို့ ရောကျပါတော့တယျ။ ရှခေထြားတဲ့ ကြောကျတံခါးနောကျမှာ ရှငျမဟာကဿပ ကိုယျတျောမွတျရှိပါတယျ။ အခှငျ့သငျ့ပါက တံခါးပှငျ့တာနဲ့ ကွုံတတျတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဂူထဲကိုဖွတျစီးသှားတဲ့ ခြောငျးတဈလြှောကျ မိမိကပျခငျြတဲ့ လှူဖှယျတှကေို ပနျးကနျနဲ့ထညျ့ပွီး မြောလိုကျရငျ တဈဖကျထှကျပေါကျမှာ ပနျးကနျပဲ ပွနျပါလာတယျလို့ ကွားဖူးတယျ။ ဟုတျမဟုတျစမျးသပျခြိနျမရလိုကျဘူး။ ဒီနပေဲ့ ပွနျရမှာမို့ ခပျသှကျသှကျဖူးခဲ့ရတာ။ ရှငျသူငယျပေါကျဆိုတာကိုလညျး ကွညျ့ဖွဈအောငျတော့ ကွညျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။ အခှငျ့မြားရရငျ အဖျောကောငျးနဲ့ အထဲကို သှားကွညျ့ခငျြသေးတာ။ ရှဥေမငျက ပုဂံထိပေါကျတယျဆိုတဲ့လမျးလိုမြိုး ဟုတျမဟုတျ စူးစမျးခငျြစိတျနဲ့ပါ။
သဈစခနျးကို ပွနျရောကျတော့ ကားက ပွငျဆငျလို့ ပွီးနခေဲ့ပွီ။ တဈခါတညျး ကားနှဈစီးအပွိုငျမောငျးပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ။ ညောငျပငျကွီးဆိပျရောကျတော့ ညကွီးမိုးခြုပျရပေကျနသေေးတော့တာ။ လှသေမားတှကေို မနညျးတောငျးပနျပွီး မပကျဖို့ ပွောရတယျ။ ဒီနေ့ သင်ျကွနျနောကျဆုံးနလေ့ေ။
အိမျပွနျရောကျတော့ အတှအေ့ကွုံတှေ ဖောငျဖှဲ့ပွောရငျး ရီလိုကျကွ မောလိုကျကွ။ သွျော……ခရီးဆိုတာ အခကျအခဲတှနေဲ့လညျး တှကွေုံ့ရတတျတာကိုး။ တဈခါတဈလလေညျး မစီစဉျပဲ ခရီးတဈခုကို သှားဖွဈခဲ့တတျပါလား။ ခရီးစဉျတိုငျးကလညျး အဆငျပွခြေောမှနေ့တေတျတာမြိုးခညျြးပဲလညျး မဟုတျဘူးလေ။ စိတျလှုပျရှားစရာတှေ ကိုလညျး ပေးစှမျးတတျတာကိုး။ အခကျအခကျကွုံခဲ့တာမို့ ခရီးမထှကျတော့ဘူးလားလို့ဆုံးဖွတျဖို့နနေသောသာ ခရီးဆကျဖို့ခညျြးဖွဈနတေော့တာ…
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 12:28 PM4comments Links to this post
ဖုန်ထူတယ်ပြောပြော လတ်ဆတ်တဲ့လေကို နှစ်သက်ပါတယ်၊
ပူလွန်းတယ်ထင်ထင် အညာနွေကို ကြိုက်ပါတယ်၊
ပြန်ရခါနီးလို့ ညတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာ အိပ်မပျော်တဲ့အတွက်)
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 9:06 AM 10 comments Links to this post
ကျနော်စသိတဲ့ လေးထောင့်ပုံးလေးက အရုပ်တွေမြင်ရတယ်လေ။ သစ်သားလေးထောင့်ပုံးလေးပေါ့။ Toshiba (made in japan) ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးနဲ့။ စက်ရုံစတည်တော့ သယ်လာခဲ့တာ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ဖျော်ဖြေရေး။
၀န်ထမ်းရပ်ကွက်တွေက ၁၅၀စကေး၊ ၂၁၀စကေး၊ ၄၀၀စကေး၊ ၄၅၀စကေး၊ ၈၀၀စကေး အရင်တုန်းက ရတဲ့လစာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ ရပ်ကွက်လေးတွေ။ ဆင်တူအိမ်လေးတွေနဲ့လေ။ တစ်ခြားအရပ်ကလူ လာလည်လို့ကတော့ မျက်စိလည်မြဲ။ ရပ်ကွက်တစ်ခုစီအတွက် အဲဒီလေးထောင့်ပုံလေးတစ်လုံး ကနေ နှစ်လုံးလောက်အထိ ထားထားပေးပါတယ်။ ဇာတ်ကားကောင်းပြီဟေ့ဆို နေရာဦးပေရော့။ ပါချီပါချက်အဲဒီ ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကလေးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချို့ယွင်းလာတော့ ဟိုဘက်ကပုတ် ဒီဘက်ကပုတ် ဟိုကျူးနင်းလေးလှည့် ဒီကျူးနင်းလေးလှည့်။ ဆီပျောက်မီးပျောက်ကယ်နဲ့ ပိန်မသာလိမ်မသာရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကြည့်မပျက်ခဲ့ကြဘူး။ ဇာတ်ကားမလာခင် အမျိုးသမီးတွေက စကားပြော ကျနော်တို့ ကလေးတွေကတော့ လူစုပေးထားတဲ့ ကစားကွင်းပေ့ါဗျာ။
ကျနော်ကလည်း ဘမျိုးဘိုးတူ ချိုကလေးနဲ့လေ။ ဘမျိုးဘိုးတူဆို ကျနော့အမေက ရွှေမန်းတဲ့ဆိုရင် လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးသားတဲ့ဗျ။ မကြည့်ရလို့ကတော့ အိမ်ရှိပစ္စည်းကုန်အောင်ဖျက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုး။ ဖေကကော ရုပ်ရုင်မကြည့်ရလို့ ငိုတဲ့စတိုင်လေးနဲ့ နာမည်တွင်သွားတာက မောင်ဖင်ဆောင့်ငိုတဲ့ဗျား။ ဆိုတော့ လာသမျှကား ပိတ်ကားပေါ်အရုပ်ထင်ကောင်းတယ် ဖြစ်အောင် ကျနော်ကလည်း ကြည့်တော့တာပါပဲ။ Air wolf လိုကားမျိုးဆို တီးလုံးကိုအလွတ်ရတဲ့အထိ စွဲလမ်းတာ။ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် နောက်ခံတီးလုံးက အဲဒီတီးလုံးဗျ။ မသိရင် ဟယ်လီကော်ပတာကြီးပဲ မောင်းနေသလိုလို။ တကယ်တမ်းက ရာဘာဖိနပ်ကို အ၀ိုင်းဝိုင်း ၀ါးခြမ်းပြားတွေကို သားရေပင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မော်တော်ကားလေးပါ။
၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်ကွက် လေးထောင့်ပုံးလေး လုံးဝပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ပြင်ဖို့ကလည်း မလွယ် အသစ်ကလည်း ၀ယ်မပေးနိုင်ပြန်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့လူတစ်ချို့ ဆီမှာတော့ လေးထောင့်ပုံးလှလှလေးတွေ ရှိနေပြန်ရော။
အိမ်နားက လူဝကြီးတွေအိမ်က (တစ်မိသားစုလုံးကို ၀တာပါ) သူတို့ အိမ်မှာ လာကြည့်ပါဆိုတော့ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ ညတိုင်းနီးပါးလောက်ကို သွားကြည့်ဖြစ်တာ။ နောက်တော့ ကျနော့ကြောင့် သူတို့ အိပ်ရေးပျက်ရတယ် အလိုက်မသိတတ်ဘူးဆိုမှပဲ ကျနော့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်လိုက်ရတယ်။ အဲလောက် အတာ နတာ။
ဗွီဒီယိုတွေထွန်းကားတော့ ဈေးလေးသေးသေးလေး ထဲက သုံးဆိုင်သော ရုံရဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ကားတွေကြားမှာ ရွေးရခက်ကြီး ဖြစ်ရမြဲ။ ဘယ်လောက်တောင်ကြည့်ခဲ့သလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင် ရလိုက်တဲ့အထိ။ ရုံပိုင်နဲ့ ရင်းနှီးသွားတာလေ။
မြ၀တီစလွှင့်တော့ နောက်တစ်အိမ်က ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပြန်ရော။ ကားတွေ သီချင်းတွေကလည်းကောင်းဆိုတော့ အိမ်မှာနေတဲ့ အချိန်ထက် လေးထောင့်ပုံးလေရှေ့မှာနေတဲ့အချိန်က ပိုများနေတတ်တယ်။ စာမေးပွဲတွင်းလည်း ဦးနှောက်ဆေးတယ်ဆိုပြီး ကြည့်တာပါပဲ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင် လေးထောင့်လေးက Daweoo ဆိုတဲ့ တံဆိပ်လေးပါ။ ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးတဲ့ Gasကို ဖေကလျှောက်ရပါတယ်။ ရပြီလာထုတ်ပါဆိုတော့ ပျော်ကြတာပေါ့ဗျာ။ မေကတော့ ပိုက်ဆံမလောက်ခဲ့ရင် ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းလေး နည်းနည်း ထည့်မယ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သူ့လက်က ဘာမှထွက်မလာဘူး။ သူရွတ်နေကြက ရှေးပစ္စည်းတွေတဲ့လေ။ ဖေရန်ကုန်ကပြန်လာတော့ အဲဒီလေးထောင့်ပုံးလေး နဲ့ဗျ။ ရောင်းလို့ရတဲ့ သုံးသောင်း (နောက်မှ အများကြီးတန်ဖိုးရှိတာ သိလိုက်ရတာပါ၊ တောသူတောင်သားဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာလည်း နေဖို့အစီအစဉ် မရှိ ဘာမရှိ ရောင်းလိုက်တာပဲ အေးပါတယ်နဲ့ ရောင်းခဲ့လိုက်တာ) ဖေ့သူငယ်ချင်းက စိုက်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေလေးနဲ့ ၀ယ်လာခဲ့တာ။
စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ဖေကတော့ တစ်လက်ကိုင်တရိုတသေလေ။ ဖေ့တပည့်တစ်ယောက်ပြန်ဝယ်သွားတော့ကို တော်တော်လေးကောင်းနေသေးတာ။
အခုတော့ အရင်လို မှန်ဘီလူးခုံးတွေ မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ LCDတွေ ပြီးတော့ HDV ဆိုတာတွေလည်း ဖြစ်လာတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာပိုင်းနဲ့အတူ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ လေးထောင့်ပုံးကိုယ်စီနဲ့။ အိမ်ထဲဝင်မကြည့်ဖြစ်ရင်တောင် ခေါင်မိုးပေါ်က ငါးကြင်းရိုးကို ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လေ။ တစ်ချို့ ဒယ်အိုးကြီးတောင်လှန်လို့။
ဒါပေမယ့် ကျနော်လွမ်းနေမိတာက အရင်လို သစ်သားပုံးလေးရယ် ကျနော့်ကစားဖော်တွေရယ်။ ခုတော့ တစ်အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ၀ါးအစည်းပြေသလိုပဲ။ တစ်အိမ်တည်းသား ကျနော်တောင်မှ အခုရုပ်မြင်သံကြားမကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပြီ…….
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 3:21 PM9comments Links to this post
အစရှိရင် အဆုံးရှိရသတဲ့။ ကိုယ်ကစမိပြီဆိုတော့ အဆုံးတော့သတ်ပေးရဦးမှာပေါ့။ မိုးကြိုးပစ်တာ ထန်းလက်နဲ့ကာတာပါ။ တစ်ကယ်တမ်းက ဒီကားကိုမလာခင်ကတည်းကို ကြည့်ချင်နေတာ။ အဲဒီလို စိတ်နဲ့တော့ ခက်ပါသေးတယ်။
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ၀ူဘုရင်ငယ်ရဲ့ ညီမက အများကြီး ဇာတ်သယ်သွားခဲ့တာ။ ရန်သူ့စခန်းမှာ သူလျှိုလုပ်ပြီး တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ စစ်စခန်းမြေပုံကို သူဆွဲပေးနိုင်ခဲ့တာလေ။ တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ မိန်းမဥာဏ်လေးနဲ့ မကြောက်မရွံ့ သူမို့ တတ်လည်းတတ်နိုင်ပါပေတယ်။
စစ်ဖြစ်လာရင် တရားမျှတသော စစ်ဆင်နွှဲတဲ့သူရှိသလို အနိုင်ရရေး ဦးစားပေးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတတ်တာကိုး။ ကိုယ့်ဘက်က အားနည်းချက်ကို သူများဘက်ကိုလည်း ရောက်ရအောင် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကြံစည်တတ်ကြတယ်လေ။
လောကမှာ လူဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ရန်သူဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ် အတိဒုက္ခရောက်လာရင် ကိုယ်လက်မလောင်ပင်မယ့် ၀င်ရောက်ပူဆွေးခံစားတတ်သူတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျိုးယုရဲ့ ဇနီးက ပြသခဲ့ပါတယ်။ လက်သည်းဆိတ်မှ လက်ထိပ်နာတတ်ကြတာက များတယ်လေနော်။ လူ့အသက်တစ်ချောင်းရယ်မို့ မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တော့ နှမြောမိတာပါပဲ။ အသက်တစ်ချောင်းနောက်မှာ အသက်ပေါင်းများစွာက ပူဆွေးနေရမှာလေ။ အများအတွက်အသက်စွန့်သွားလို့၊ ဘယ်လို လောကကိုကောင်းကျိုးပြုသွားလို့ ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို မေ့ထားပြီးမှပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်လောက်ဆိုးသွမ်းတဲ့လူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ အရာတစ်ခု သူ့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့နေရာတစ်ခု မလွဲမသွေ ရှိကိုရှိနေလို့ပါပဲ။
ရိုးသားတဲ့လူဆိုတာလည်း ရှိနေတတ်တာပဲနော်။ ဘယ်လောက်တောင် ရိုးအ,သလဲဆို သူလျှိုကိုတောင်မှ သူငယ်ချင်းကောင်းလို့ထင်နေတဲ့အထိလေ။ နောက်ဆုံးအဲဒီရိုးအ,မှုနဲ့ပဲ သူ့အသက်ကို လွယ်လွယ်စွန့်လွှတ်သွားခဲ့ရတာ။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာလေးက အမြဲအေးချမ်းနေတာပဲ။ သေတာတောင် ပြုံးပြုံးလေး သေသွားခဲ့တာလေ။
မိတ်ဆွေအတုအယောင်တွေကလည်း ပေါမှပေါပဲ။ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဝါအတွက် မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ အဆင့်ကို လွယ်လွယ်လေးဖျက်နေကြပါကလား။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြန်လည် အသုံးချနေကြတဲ့သူတွေကို မိတ်ဆွေတွေလို့ ခေါ်သင့်ရဲ့လားဟင်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲလိုမိတ်ဆွေတုဆိုရင် မတွေ့ချင် မဆုံချင်မိဘူး။ ဆုတောင်းတိုင်းကလည်း ပြည့်မှာမှ မဟုတ်ပဲ။
အသိဥာဏ်ပညာ က အရာရာမှာ တကယ့်တန်ဖိုးအစစ်အမှန်။ မိမိမှာရှိတဲ့ အသိကြောင့် တစ်ချို့ အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ အောင်မြင်သွားတတ်ကြတယ်လေ။ ကျူးလျန်ဆိုတဲ့ ပညာရှိကြောင့် လွယ်လင့်တကူရလိုက်တဲ့ မျှားတွေက လိုတာထက်တောင်ပိုနေသေးတာကိုး။
ပြီးတော့ လောကကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝ။ အခုရှိနေပင်မယ့် နောင်ရှိချင်မှ ရှိတတ်တာမျိုး။ အခြေအနေ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘာဝကို အလိုက်အထိုက်နေတတ်အောင် တော်တော်လေး လေ့ကျင့်ယူရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက သေနင်္ဂဗျူဟာ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဘယ်လိုစနစ်တကျ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ နည်းပညာ အုပ်ချုပ်မှု သေ၀ပ်မှု စသည် စသည်။ ချောင်ချောင်းရဲ့ နေမကောင်းတဲ့ သူ့လူတွေကို လှုံဆော်တဲ့ အခန်းလေးကိုလည်း တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပီပီ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို မရောက်ရောက်အောင် ငါခေါင်းဆောင်ပဲ ငါပြောတာလုပ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းသွတ်သွင်းတာမဟုတ်ပဲ စိတ်လိုလက်ရအင်တိုက်အားတိုက် ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့နည်းလမ်းကိုပါ။
ဒီစစ်ပွဲရဲ့ ဦးတည်ချက်ကိုက မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တဲ့။ အခုလည်း ဒီမိန်းမချောတစ်ယောက်ရဲ့ လှည့်ဖျားမှု အောက်မှာ ချောင်ချောင်းတစ်ယောက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာပါပဲ။ သူသောက်ခဲ့မိတဲ့ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ရဲ့ တန်ဖိုးက သိပ်ကိုကြီးမားလွန်းတယ်။
စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း။ သိပ်ကို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ စကားလုံးပေါ့။ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် စွန်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့ ကိုယ့်အသက်ကို စတေးရဲတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတော့ ချီးကျူးသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို နှစ်ဖက်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကယ်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်သူတစ်ယောက်။ နောက်တစ်ဖက်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အသုံးချပြီး လှည့်စားခဲ့သူတစ်ယောက်။ လောကကြီးမှာ အမြင်တွေက များကိုများတယ်လေ။
စစ်ပွဲဆိုတာနဲ့ သူရဲကောင်းဆိုတာတွေက အမြဲပါနေကျ။ အသေအပျောက် ဆုံးရှူံးမှု ဒဏ်ရာအနာတစ်ရဆိုတာ ကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ အောင်နိုင်သူတွေကကော အဲဒါတွေကြည့်ပြီး ပျော်နိုင်ကြရဲ့လား။ စစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့သူတိုင်းကို အသောကလို သံဝေဂတွေ ရစေချင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဂါဇာစစ်ပွဲ တစ်ပွဲတော့နွှဲနေကြပြန်ပြီလေ။
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်တည်ခဲ့ကြတာတဲ့။ ဒီလောကကြီးမှာ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေကလည်း မကင်းနိုင်လေတော့ အိမ်တွင်းစစ် ပြည်တွင်းစစ် ကမ္ဘာ့စစ်အထိ ရှိနေကြတုန်းပဲ။ ငြိမ်းအေးတဲ့ သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့ ဘာတွေများပေးဆပ်ကြရဦးမှာပါလိမ့်။ လူ့အသက်တွေ ဘယ်လောက်များများ ထပ်ပြီး စတေးရဦးမှာပါလိမ့်………………
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 4:52 AM7comments Links to this post
စာတွေရေးဖူးကြမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှသည် အရာအားလုံးအတွက် စာလေးတစ်စောင်တစ်လေတော့ ရေးဖူးကြမှာပါ။ မရေးဖူးဘူးဆိုလည်း ယုတ်ဆွအဆုံးဖတ်ဖူးကြမှာသေချာပါတယ်။ ဒီစာလေးကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်က ဖတ်ဖူးခဲ့တာပါ။ အခုတော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ပြန်လည်သတိရနေမိတယ်။
အခုလက်ရှိ လူအများစုက သိပ်အလုပ်ရှုပ်ကြပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး အတွက်လှုပ်ရှားရုန်းကန် ကြရတာ ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်နဲ့ တကယ်ကို မတူတော့ပြီလားမသိ။ များသောအားဖြင့် အလုပ်အလုပ် ငွေ….ွငွေ မအားဘူး အချိန်မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အသံတွေကြားမှာ တကယ့်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တာလား ကျနော်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်မသိနိုင်တာက လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်အကြောင်းလေ။
စာလေးကို စာတိုက်ကနေပဲပို့လိုက်တာပါ။ စာလေးကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ဖေငိုင်သွားခဲ့တယ်။ မေကြီးရေ ရွှေဇင်တော့ ဆုံးရှာပြီတဲ့။ ကလေးပီပီစူးစမ်းစွာ စာလေးကို သွားကိုင်ကြည့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖတ်တတ်ခဲ့ဘူး။
ရွှေဇင်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဖေ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ ခေါ်ရလွယ်အောင် သူတို့တွေကို မြန်မာနာမည်တွေကိုယ်စီပေးထားကြတာပါ။ ဒီစက်ရုံစတည်တော့ တည်ဆောက်ရေးအတွက် တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်ပေါ့။ သူတို့ကျနော့ကို ချစ်ခင်စွာ ချိုချဉ်တွေ မုန့်တွေ ပေးခဲ့ဘူးတာတော့ မှတ်မိသေးတယ်။ အံဆွဲထဲမှာ အခုချိန်ထိ ရှိနေသေးတဲ့ ကျနော့ ကလေးဘ၀ဓါတ်ပုံတွေက သူရိုက်ပြီး ဂျပန်က ပို့ပေးလိုက်တာတွေပေ့ါ။
စက်ရုံကြီး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဆိုတော့ ရွှေဇင်တို့တွေ နေရပ်ကို ပြန်သွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်စဉ်မပြတ် ပို့စကတ်တွေ အမှတ်တရ စာတွေ သူ့ဆီက ရတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အရာရှိတွေ ဂျပန်ကို ပညာတော်သင်သွားလို့ သူနဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် ဖေ့အတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ တခုတ်တရ သူထည့်ပေးတတ်တယ်။
အခုဒီစာကို သူ့ဇနီးက ပို့လိုက်တာပါ။ သူ့အမျိုးသားဟာ တောင်တက်ရင်းနဲ့ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကို အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်တဲ့။ သူ့အမျိုးသားရဲ့ စာပို့နေကျ လိပ်စာတွေအားလုံးကို တန်းစီပို့လိုက်ဟန်တူပါတယ်။
ဒါဟာ သူ့အတွက် အလုပ်ပိုတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို သူလုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ ဘာသာလ၀ါစိတ်နဲ့ နေလည်း နေပေါ့။ အချိန်ပေး အလေးထားပြီး စာပို့ပေးတယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို လေးစားစရာလို့ ကျနော်တော့ယူဆမိတယ်။ မှားကောင်းလည်း မှားနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မအားမလပ်တဲ့ လူတွေကြားမှာနေမိတဲ့ သူဆိုတော့ သူများအတွက် အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာ တကယ့် အစိမ်းသက်သက်စကားလိုပါပဲ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကို ငါးမိနစ်စာ အချိန်မျှဝေပေးပါဆိုတဲ့ စာလေးဖတ်ရတုန်းကလည်း ဒီစာလေးကို ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို သတိတရ မျှဝေပေးဖို့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကြိုးစားမိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အတ္တကြီးတဲ့ လူသားပီပီ အတ္တနောက်ကမှ ပရဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တော့ အမြဲတမ်းရယ်လို့ကံသေကံမ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။
ဘယ်သူမဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဆီက စာတွေ ဖုန်းတွေ မျှော်နေတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ စာလေးဖတ်လိုက်ရရင် ဖုန်းလေးပြောလိုက်ရရင်ကို ခွန်အားတွေ အင်အားတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ စာရေးပျင်းတဲ့ ကျနော့လိုလူအတွက် (ဒီဘလော့ကစာတွေ ဒီလောက်တင်တာဆိုပြီး မမြင်ပါနဲ့ဗျာ တကယ်တမ်းအပြင်မှာ ကျနော်စာရေးဖို့ သေလောက်အောင်ကို ပျင်းတာပါ) ကျနော့ မိဘ မိတ်ဆွေတွေ အပေါ်မှာ ပျက်ကွက်ခဲ့ပေါင်းများလှပေါ့။
အခုလည်း ဟိုတစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ “ဘ၀ကြီးကို ဘယ်လိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်ကျော်ရမလဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ အလုပ်ပြီး အလုပ်ဆိုတဲ့ ဒီဘ၀” ဆိုတဲ့ ညည်းတွားသံကို စဉ်းစားရင်း ဒီစာလေးက ခေါင်းထဲကို အလိုလို ရောက်လာတာပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်အောင် ကျနော်တို့ကြိုးစားသင့်တယ် ထင်တာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ မိသားစုဆိုတာက ကျနော်တို့နဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာမရှိကြလို့ပါပဲ။
ပြီးတော့ ကျနော်တို့အနားမှာရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော်တို့ တန်ဖိုးထားလေးစားစေချင်မိတယ် ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ…..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 3:19 PM 11 comments Links to this post
ကြိုးတစ်ချောင်းက ပြတ်လုပြတ်ခင်လေးမှာပါ။ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းဆွဲသာ ဖြစ်အောင် တဲတဲလေးကျန်နေတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းပါ။ ကြိုးဆိုတာ ပြတ်သွားရင် ပြန်ဆက်လို့လွယ်ပေမယ့် အထုံးတွေတော့ ကျန်နေတတ်တယ်လေ။
ဒီကြိုးရဲ့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဘာတွေများဆက်စပ်ကြတာပါလိမ့်။ ပြတ်လုပြတ်ခင်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကကော။
မူလအစကတည်းက ကြိုးစကို ဆက်သွယ်မိတာ ညာဘက်ကပါ။ ဘယ်ဘက်ကတော့ သူလာဆက်သွယ်လို့ အားနာစွာချိတ်ဆက်မိပုံပါပဲ။ ဘယ်ဘက်အတွက် ညာဘက်ပို့သမျှပေါ့။ ဘယ်ဘက်ကတော့ ခပ်တည်တည် ခပ်တင်းတင်းပါပဲ။ ညာဘက်ဆီကနေ အလိုအလျောက်မတောင်းဆိုရပါပဲ ကျလာတတ်တဲ့ အရာတွေအတွက် သူဘာပူစရာလိုမှာလဲ။ တကယ်ကို အဆင်ပြေချောမွေ့နေတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်သတ် ဆင်းနေရတဲ့ကြိုးလေး ကြာရှည်လေးမြင့်တော့ တရားသဘောကိုဆောင်ချင်လာတယ်။ တစ်ချိန်လုံးတစ်ဖက်ထဲကိုပဲ သုံးနေရတော့ နာလာတယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွားလာနေရတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကြိုးလေးက ပါးသည်ထက်ပါးလာတယ်။ လေးလံတဲ့အရာတွေမှသည် ပေါ့ပါးတဲ့အရာတွေအထိ။ အစကတော့ သိပ်မသိသာဘူးပေါ့။ နောက်တော့လည်း ကြိုးမျှင်လေးတွေ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ပြတ်လာခဲ့တယ်။
ဇက်ခနဲတော့ ပြတ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်ဘက်လိုတဲ့အရာတွေ ဒီနေ့အထိ ညာဘက်က ပို့ပေးနေပါသေးတယ်။
ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ဘယ်ဘက်က စဉ်းစားမိလား မသိပါဘူး။ ညာဘက်ကတော့ ဘာလုပ်ရမလဲတွေးနေမိသေးတယ်။ တကယ်တော့ မတွေးသင့်ဘူးထင်တာပဲနော်။ ကျနော်သာ ညာဘက်ဆိုရင်တော့ မြန်မြန်ပြတ်ပါစေဆုတောင်းမိမလားပဲ။
အခုတလော လေတွေကလည်း သိပ်တိုက်ပါတယ်။ ကြိုးလေးကလဲ ဟိုရမ်းရမ်း ဒီရမ်းရမ်းနဲ့။
ပြတ်နိုး ပြတ်နိုးပါပဲ။ ပြတ်လုပြတ်ခင်ကြိုးလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာများ ပြတ်မှာပါလိမ့်။ မပြတ်ပဲကော ဆက်လက်ဖြစ်တည်နေမှာလား။ အခုတော့……………
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 6:00 PM 15 comments Links to this post
ဖိနပ်တစ်ဖက်အကြောင်းကို ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာ ရက်စွဲတွေနဲ့ မှတ်သားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သိပ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဖိနပ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ သူလိုကိုယ်လို ရာဘာကြက်ပေါင် ဖိနပ်လေးတစ်ဖက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီဖိနပ်ရဲ့နောက်မှာ ဒဏ်ရာတွေရှိသလို နာကြင်မှုတွေလည်း ရှိနေပြန်တယ်။
သားရယ် ဒီနှစ်တော့ ဒီဖိနပ်လေးပဲစီးပါအုံး ဖေ့စကားကိုကြားတော့ ဖိနပ်ကိုပြန်ကြည့်မိတယ်။ အတန်းထဲကလူတွေရဲ့ ဖိနပ်လှလှလေးတွေကို မြင်ယောင်ရင်း ခေါင်းညိတ်ဖို့ လေးလံနေပြန်ရော။ နှစ်အစမှာ ဖိနပ်အသစ်နဲ့ကျောင်းတက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အပျော်ကို လွယ်လွယ်ပဲ ဇာတ်သိမ်းလိုက်ရတော့မတဲ့လား။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက အပြိုင်အဆိုင်ကြွားလာတဲ့ အခါ သူဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ။ ကုန်ဈေးတွေအရမ်းတက်တာပဲ ဟင်းတွေလျှော့ချက်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ မေ့ရဲ့ စကားကိုကြားယောင်ရင်း ဟင့်အင်း သားကို အသစ်တစ်ရံ ၀ယ်ပေးပါဆိုတဲ့ စကားကို ကြိတ်မှိတ်မြိုချခဲ့ပြန်ရော။
လျှောက်နေတဲ့ လမ်းတွေတိုင်းမှာ အသက်မရှိတဲ့ ဖိနပ်ကိုပဲမဲနေမိတော့တာ။ ဘာဖြစ်လို့ ဖင်ဖျားပဲပါးပါးသွားရတာလဲ။ စိတ်နာနာနဲ့ ဖိလျှောက်ပေမယ့် ပြတ်ပဲမပြတ်နိုင်ဘူး။ ငါ့နှယ်နော်…..
ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့ရောက်တော့ တောက်ပတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရောင်မှိန်လိုက်တာလို့တွေးနေမိတယ်။ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ငါဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။ သူများတွေလည်း ဒီကျောင်းမှာပဲ တက်ကြတာလေ။ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပဲ ရှင်သန်ကြတာချင်းအတူတူ။ သူမသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ငွေကြေးတွေ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေ။ သူရတတ်တဲ့ မုန့်ဖိုးဆယ်ပြားနဲ့ ဒေါ်ရွှေကြီးဆိုင်က ထန်းလျက် မုန့်လက်ဆောင်းလေးတစ်ခွက်ပဲ အမြဲသောက်ရတတ်တယ်။ တစ်ကယ်သူကြိုက်တာက ဖြူဖြူလွနေတဲ့ အုန်းနို့တွေကြား အစိမ်းရောင် မုန့်လက်ဆောင်းလေးတစ်ခွက်ပါ။
ကျောင်းကအပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘေးဘီကိုလည်း မကြည့်မိဘူး။ ငုံ့ကြည့်ရင်း အားငယ်စိတ်နဲ့ ဖိနပ်အတွက် သူစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ။
ဗြုန်းဆို မကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခု ၀င်လာခဲ့တယ်။ သွေးတွေဆူလာတယ်။ ဒါလုပ်သင့်တယ်လို့လည်း သူ့ဘာသာကောက်ချက်ချမိတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းက လုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ သူဆုံးဖြတ်ပြီးသားလေ။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ မျက်နှာကမကောင်းဘူး။ နဂိုတည်းကမှ ဟန်မဆောင်တတ်ဘူးလေ။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်အတွက် လိပ်ပြာမလုံတာရောပေါ့။ မကြာပါဘူး အိမ်ရှေ့ထွက်သွားတဲ့ မေ့ဆီက အသံတစ်ခုကြားရတယ်။ ဖေကြီးရေ တော့သားဖိနပ်ပြတ်သွားပြီ အသစ်ဝယ်ပေးလိုက်ဦးတဲ့ မနက်ဖြန်ကျောင်းတက်ရဦးမှာတဲ့။
နောက်တစ်နေ့မနက်ကို သူပျော်ရွှင်စွာကျောင်းသွားခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မနက်က သားအဖနှစ်ယောက်ထမင်းချိုင့်ထည့် အပြီးမှာ အိမ်မှာ ဘာဟင်းမှ မကျန်ခဲ့တော့တာ သူသတိထားမိခဲ့တယ်။ အပျော်တွေလွန်ပြီး မေ့ကိုဘာမှ မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါပဲ။ နောက်ရက်တွေမှာလည်း အဲဒီလိုပဲဆိုတာကိုပါ။
အခုဖိနပ်အသစ်တွေဝယ်လို့ ရနေပြီ။ အဲဒီဖိနပ်အသစ်တွေဝယ်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ဖေနဲ့မေပျိုးထောင်ပေးတဲ့ ဘ၀နဲ့ရခဲ့တာ။ ဖိနပ်အသစ်တွေဝယ်တိုင်း ငယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အပြစ်က အတိတ်တစ္ဆေလိုပါပဲ။
မေနဲ့တွေ့ရင်တော့ အဲဒီတုန်းက ဟင်းဘာဖြစ်လို့မကျန်ခဲ့သလဲဆိုတာကို မေးဖြစ်အောင်မေးရအုန်းမယ်။ အံမယ် ကျုပ်က ငယ်ရာက ကြီးလာတာပါတော် ဒီဖိနပ်ဘာကြောင့်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ သိတာမှ ဟိုဘက်ကမ်းတောင်လွန်နေသေးလို့များ မေက စရင် ရှက်ရှက်နဲ့ ရယ်နေမယ့် သူ့မျက်နှာကို တွေးရင်း အခုထဲက ရှက်နေပြန်ရော။
ဒီဖိနပ်တစ်ဖက်က အခုအချိန်ထိ ဒိုင်ယာရီထဲမှာပါ။ စာမျက်နှာပေါ်မတင်ပင်မယ့် ဒီဒိုင်ယာရီက သူ့အလိုလို ဖတ်နေမိတတ်တာ။ ရင်ဘတ်ထဲက ဒိုင်ယာရီမှာ တင်မိတာဆိုတော့လည်း…..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 12:24 PM 10 comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 10:53 PM9comments Links to this post
တတိယ အကြိမ်သို့ ပထမဆုံးအခေါက်
မနှဈကရညျရှယျထားပွီးမလုပျဖွဈခဲ့တဲ့ အလုပျတဈခုကိုဒီနှဈထဲမှာ လုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီအလုပျကို လုပျဖွဈဖို့ ကိုပငျပုကဈြဂှရဲ့ စာတှကေ တှနျးအားပေးခဲ့တာပါ။ ဒီတဈခါတော့ တဈကယျလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ ကိုပငျပုကဈြဂှရေ……
ဒီဇငျဘာထဲက ညနခေငျးတဈခုအတှကျပါ။ ကနြျောလုပျသငျ့တယျလို့ အမွဲခံယူထားခဲ့တယျ။ ဒီဇငျဘာလတဈလလုံးက အဆငျမပွခေဲ့ဘူး။ ကွိုတငျစီမံထားရငျ ဖွဈနကွေအတိုငျး အဖကျြတှအေမြိုးမြိုး၊ အဆငျမပွတောတှေ တဈခုပွီးတဈခုပေါ့။ မနကေ့စနနေမှေ့ာတော့ ဗွုနျးစားကွီးစီစဉျပွီး ၁၀နာရီ ၁၀နာရီကနေ ၁၀နာရီခှဲ။ နောကျတော့ ရောကျကိုရောကျဖွဈခဲ့တယျ။ ဘူတာကထှကျတာနဲ့ သှေးလှူဘဏျ။ စနဈတကတြညျဆောကျထားတာပါ။ အရာအားလုံးက တဈကယျ့ကိုစနဈတကြ။
ပထမဆုံး အခေါကျက မဖွဈမနဖွေဈသှားခဲ့တာ။ ရုံးမှာ Social & Recreation Club ဆိုတဲ့အသငျးရှိပါတယျ။ ကနြော့အထကျက စီနီယာတဈယောကျအထှကျမှာ ကနြျောက အလိုလို အသငျးဝငျဖွဈသှားခဲ့တာ။ အသငျးက ဦးစီးကငျြးပတဲ့ ဝနျထမျးမြားသှေးလှူပှဲဆိုတော့ အသငျးဝငျတှကေ နာမညျစာရငျးထိပျဆုံးကပါ။ လှူတာတော့ အလယျလောကျကပေါ့။ သူတို့တှကေ မှတျတမျးတငျ ဗှီဒီယိုတှရေိုကျ အငျတာတှဗြေူးဆိုတော့ နဂိုက ကငျမရာကွောကျတတျတဲ့ကနြျောက နောကျကပေါ့။ အရေးထဲ မွဝတီက ကငျမရာမနျးတှကေို သှားချေါဖို့တာဝနျပေးတာမို့ မွဝတီကို အပွေးအလှား။ မွဝတီကမြှ တာဝနျကကြငျမရာမနျးကိုရှာပွီး ပွနျပွေးလာရတာလေ။ သှေးစဈရငျးမနနေိုငျတဲ့အကငျြ့နဲ့ သှေးအုပျစုဘယျလိုခှဲခွားလဲဆိုတာ မေးရငျး ရောကျလာသမြှနောကျလူတှကေို လကေ့ငျြ့စဈဆေးပေးခဲ့သေးတယျ။ သှေးလှူပွီးတော့လညျး ငွိမျငွိမျထိုငျမနနေိုငျပွနျဘူး။ လှူပွီးတဲ့လူတိုငျး မုနျ့တှေ နို့ပုလငျးတှေ လကျဆောငျတှေ မရမရှိရလအေောငျ ဆျောသွရပွနျရော။ တဈဖှဲဖှဲရောကျလာတဲ့ ကနြေျာ့ဌာနက ဝနျထမျးတှကေို စပွီး ဖောငျဖွညျ့တဲ့စီကနေ သှေးလှူကုတငျပျေါရောကျတဲ့အထိ ရှကွေိုလညျးလုပျမိပွနျတယျ။ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ မလှူလိုကျရတဲ့လူတှကေိုလညျး နောကျတဈခေါကျလှူလို့ရပါတယျဆိုတာကို အားပေးရပွနျပါတယျ။ ဘယျလောကျတောငျမကျြစိနောကျသှားလဲမသိဘူး ဆရာမဒျေါသီတာအောငျက နငျငါတို့ဆီမှာအလုပျလာလုပျပါလားလို့ ပွောတဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့တာ။
ဒုတိယအခေါကျကတော့ စတိုဌာနက ကိုဘုရားဒါယကာ (တရားအကွောငျးဘုရားအကွောငျး ပွောတတျလှနျးလို့ ဒီနာမညျပေးထားတာ) အစာအိမျပေါကျလို့ အရေးတကွီးသှေးလိုခဲ့ပါတယျ။ ရုံးကသှေးလှူစာရငျးကနေ သှေးအုပျစုတူတဲ့လူတှစောရငျးတောငျး သူတို့ကို နိုးဆျောခဲ့တယျ။ မွောကျဥက်ကလာပဆေးရုံကွီးမှာ သှေးပုလငျးမရှိတော့အောငျပွတျလပျခဲ့တဲ့အခြိနျပါ။ အဲဒီတော့ အားလုံးကို မေးလျပို့ လှူနိုငျမယျ့လူတှကေိုစုပွီး ရုံးကအပွနျမှာသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တာပါ။ သှေးလိုတဲ့လူနာရှငျတှကေလညျး ကနြျောတို့ကိုကွညျ့ပွီး ဘာသှေးလှူမှာလဲဆိုတာ တတှတျတှတျမေးနတော။ သိပျကိုလိုအပျနပေုံပါပဲ။ သှေးတဈပုလငျးမှမရှိဘူးဆိုတော့ တကယျ့အရေးပျေါဆို ဘယျလိုလုပျကွမလဲ ကနြျောတှေးပူမိပါသေးတယျ။ လူ့အသကျတဈခြောငျးက ဒီလိုကိစ်စတှအေတှကျနဲ့ ဆုံးရှူံးရမယျဆိုရငျ မထိုကျတနျဖူးလနေျော။
အခုတတိယအကွိမျကိုတော့ မနကေ့လှူဖွဈခဲ့တာ။ ကနြျောတို့မွနျမာတှေ လာရောကျလှူဒါနျးပုံရှိဟနျတူပါရဲ့။ နပျဈမလေးက မွနျမာလို နကေောငျးလား မင်ျဂလာပါလို့ နှုတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျဆိုတဲ့ စာတမျးလေးကပျပေးလိုကျတာကွောငျ့ အားလုံးက အဆငျပွလေား ခေါငျးမူးလား ဘာဖွဈသလဲလာမေးနကွေပွနျတယျ။ အိုကပေါတယျဆိုတာကို ခဏခဏပွနျပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျတော့ အရငျအခါတှလေို လှုပျခှငျ့မရလိုကျပါဘူး နာရီတှေ မိနဈတှေ တိကစြှာမှတျသားပွီး ၁၀မိနဈအတိမှ ကုတငျပျေါကထခှငျ့ပေးလို့ပါ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ မနှဈကမလုပျဖွဈခဲ့တာကို ဒီနှဈမှာတော့ လုပျဖွဈခဲ့ပါပွီ။ ဒုတိယတဈခေါကျက မတျလ ၂၈ရကျနဆေို့တော့ နောကျတဈခေါကျဘယျတော့ဖွဈနိုငျမလဲဆိုတာတော့ ကနြျောလညျး သခြောမသိပွနျဘူး။ အနညျးဆုံးတဈနှဈတဈခေါကျတော့ လုပျဖွဈအောငျလုပျမယျလို့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ ဒီစာလေးကနေ စာဖတျသူတှပေါ လှူဒါနျးခငျြစိတျပေါကျသှားခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ကနြော့အတှကျ အခေါကျပေါငျးမြားစှာ ဖွဈသှားမှာပါဗြာ။ ဟုတျတယျဟုတျ…..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 9:50 AM 14 comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 12:52 AM6comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 10:28 PM 8 comments Links to this post
ဇန်န၀ါရီလမှာ နှင်းတွေကျတတ်တယ်။ သိပ်သိပ်သည်းသည်း မဟုတ်ပေမယ့် နှင်းတွေကျနေတယ်ဆိုတာကို မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ မြင်ရတတ်တယ်လေ။ နှင်းစက်တွေမှုန်မှုန်ကျပြီးရင် လူသူမဖြတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ မသိမသာလေး နှင်းတွေ ကျန်ရှိနေတတ်လေရဲ့။ မင်းဖြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ နှင်းခြေရာတွေကနေ တစ်ဆင့် မြင်ခဲ့ရတာပါ။ မငြင်းနဲ့နော် နေလာရင် နှင်းခြေရာတွေ ပျောက်မှာကို သိသိနဲ့ မငြင်းလိုက်ပါနဲ့။ မျက်စိမှောက်တယ်ပြောချင်လည်းပြောလိုက်ပါ နှင်းခြေရာရှင်ရယ် ငြင်းတော့မငြင်းလိုက်ပါနဲ့…
မင်းကလေ သုတ်ခနဲ ထွက်ပြေးသွားတတ်တဲ့လေပြေလိုပဲ တစ်ချက်တစ်ချက် ငါ့ရင်ကို တိုက်ခတ်သွားတတ်တယ်။ မင်းရောက်လာတာကို အစက ငါမှမမြင်မသိခဲ့တာ။ မင်းဆီက ၀င်သက်ထွက်သက်ကို တစ်ချက်တစ်ချက် ငါရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပါပဲ။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေကို နင်းသွားတဲ့ခြေသံလား သဲ့သဲ့တော့ ငါကြားမိတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်ပလောင်လေးတွေ လျှောက်သွားနေတယ်ပဲ စိတ်ထဲကတွေးနေမိတာ။
အနံ့အသက်ဆန်းဆန်း တစ်ခုလည်းငါခံစားမိခဲ့တယ်။ သစ်ပင်တွေက ထွက်တဲ့ အနံ့တွေလို့ပဲ စိတ်မှာစွဲနေခဲ့တာ။ အနားမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ထင်မိလို့ ဖျတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်မိတာလည်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။ လုံအောင်ပုန်းနေသူကို ဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်မှာလဲနော်။ မင်းကတော့ လုံခြုံတဲ့ တစ်နေရာကနေ ငါ့အဖြစ်ကို ဟားတိုက်ရယ်နေသတဲ့လား….ဟင်။
မသိုးမသန့် စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတိုင်း ငါလုပ်နေကြ ဘုရားစာကို ရှေ့နောက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရွတ်ခဲ့ပါရဲ့။ စိတ်ထဲမှာတော့ ရှင်းမသွားခဲ့ဘူး။ မင်းဘာလိုချင်ခဲ့တာလဲ။ င့ါကို ခြောက်လှန့်ယုံသက်သက်တဲ့လား။ မင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တဲ့လား။ ဟား………..မင်းတော်တော်လေး တတ်နိုင်ပါလား။ မင်းရသွားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ငါ့ဖက်က ပေးဆပ်ရတာတွေကို ထည့်တွက်ခဲ့သင့်ပါတယ်လေ။ ငါလေ..ငါလေ မင်းရဲ့ ခြောက်လှန့်မှုတွေ အတွက် သွေးပျက်မတတ် ကြောက်လန့်ခဲ့ရတာ။ အနှစ်နှစ်အလလ မင်းငါ့ကို ခြောက်လှန့်ခဲ့တာလေ။ ဟောဒီ ဇန်န၀ါရီနှင်းစက်တွေကို မြင်တိုင်း အလဲလဲ အပြိုပြို။ နှင်းတွေနဲ့အတူ မင်းရောက်လာတတ်စမြဲမို့။
ကံကောင်းထောက်မစွာ ဇန်န၀ါရီလရဲ့ နေ့ရက်တစ်ချို့မှာသာ နှင်းကျတတ်တာပါ။ နေ့တိုင်း မကျတတ်တာတော့ ငါ့အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ ခွင့်လွတ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ မဟုတ်ရင် ငါဟာနေ့တိုင်းရူးသွပ်နေရမှာ။
၀န်ခံစရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ငါ့နားရွက်ထဲကို မင်းဖွဖွလေး စကားပြောတိုင်း ငါကြည်နူးမိတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ မင်းပြောတဲ့ စကားသံကိုက ညင်သာမှုအပြည့်နဲ့။ အဲဒီအချိန်တွေက မင်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အချိန်တွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့ မင်းဘာဖြစ်လို့ အကြင်နာဆိုတာကို မခံစားတတ်ခဲ့တာပါလိမ့်။ ထည့်မတွက်ရလောက်အောင်အထိ ငါဟာ သေးဖွဲသိမ်နုပ်နေပြီလားဟင်။
မင်းဟာဆော့ကစားတတ်ပါလားလို့ သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ငါဟာတော်တော်လေး နောက်ကျနေခဲ့ပြီ။ မင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိပြီး အချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ငါဟာ မင်းအတွက်ခံစားတတ်နေခဲ့ပြီ။ မင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအတွက် ငါနှလုံးသွင်းမိသွားပြီ။ မင်းမရှိလည်း ငါဟာ လိုက်ရှာနေချင်ခဲ့တာ။ ခြေရာတွေကို ကောက်ရင်း မင်းရဲ့ လာရင်းအစစ်အမှန်ကိုလည်း ငါသိပ်သိချင်နေခဲ့တာ။
တစ်ချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အရိပ်အယောင်ပြခဲ့ရင် ငါကျေနပ်ခဲ့မှာ။ သစ်ရွက်ကလေးတွေလှုပ်ပြတာ၊ လေတစ်ချက်အဝှေ့မှာငါနားကိုကပ်ကပ်လာတတ်တာ၊ အသံတွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တာတွေဟာ ငါ့အတွက် မင်းရဲ့ ခြောက်လှန့်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ နှင်းစက်ခြေရာတွေကတော့ သေချာတဲ့ အမှတ်အသားတွေပေါ့။ မင်းမဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပေမယ့် နေရောင်လာရင်တော့ ငါမတွေ့နိုင်တော့ပြီလေ။
ရက်စက်တယ်လို့ ငါမဆိုရက်ပါဘူး။ တစ်ခုလောက်ပဲ ငါတောင်းဆိုချင်တာပါ။ ဇန်န၀ါရီရောက်တိုင်း ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက နှင်းစက်ခြေရာတွေမရောက်ရှိရလေအောင် တစ်ချက်လောက် ကူညီပေးပါ။ နေရောင်လာရင် ဒီခြေရာတွေ ပျောက်မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်။ ဒီခြေရာတွေ မရှိခဲ့အောင် မရှိရလေအောင် မင်းတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးပါ။ မင်းခြေရာတွေ မချန်ရစ်ခဲ့ပါဘူးလို့တော့ မငြင်းလိုက်ပါနဲ့နော်။ နှင်းစက်တွေပေါ်က ခြေရာတွေက ငါ့ရင်ဘတ်မှာ အတိုင်းသားထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ မင်းမနင်းခဲ့ဘူးဆိုပေမယ့် ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ဒီခြေရာတွေက အထင်းသားလေ…………..နေရောင်မလာခင်အထိပေါ့
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 5:51 PM 10 comments Links to this post
မနေ့ညက ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ ပျော်စရာတွေရှာနေခဲ့တာပါလား။ ရုံးကနေ ညနေ ၄နာရီမှာပြန်လာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုံးဆက်မိတယ်။ ဒီညဘာလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး။ ဒီည လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကောင်းမယ်ထင်တာတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တာပါပဲ။
ရုံးကအစ်မကြီးက သူ့အိမ်မှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ အကြော်စုံစားရင်း နှစ်သစ်ကိုကြိုကြမယ်ဆိုပါတယ်။ သူ့အိမ်ကိုရောက်တော့ ၆နာရီကျော်နေပြီ။ အကြော်ပွဲကစနေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း MIT ကအစ်ကိုကြီးတွေ အစ်မကြီး တွေ့ဆုံပွဲပါ။ မိန်းကလေးတွေက မီးဖိုချောင်မှာကြော်။ အမျိုးသားတွေကတော့ အိမ်ရှေ့မှာ စားရင်းသောက်ရင်း TV ကြည့်။ တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲလာတဲ့ အကြော်ပွဲတွေမကုန်မချင်း။ ကျနော့ ရည်ရွယ်ရင်း သီချင်းဆိုချင်တဲ့ကိစ္စ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ အဆိုတော်ကို ကြောက်လို့ တီးဝိုင်းဆရာက မလာရဲဘူးတဲ့ဗျာ။
နောက်တော့ ကိုဇင်ယော်ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးကို ခေါ်ပါဗျာလို့တောင်းပန်တယ်။ သူတို့နဲ့လိုက်ချင်လို့ပါဆိုတာ မခေါ်ဘူးဗျာ ထားပစ်ခဲ့တယ်။ (စတာနော် ပျံမပြေးချင်တဲ့ကိုဇင်ယော်)။ ကိုကြီးဝီကလည်း သူတစ်ယောက်တည်း အပျော်ရှာပါတယ်။ ညီရွာသား ညီရွာသားဆိုပြီး အမြဲထားခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ မပြောဘူးလို့ပဲ အခုတော့ စိတ်အရမ်းနာလို့ပါခင်ဗျာ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တယ် ကင်မရာယူလာမယ်ဆိုတော့ အဲဒီ countdown ဘက်ကို ဦးလှည့်ရပြန်ပါတယ်။ နဂိုတည်းက အိမ်မပြန်ချင်တာနဲ့တော့ တွေ့ပြီလေ။ ဒါနဲ့ countdown လုပ်မယ့်နေရာရောက်တော့ သူငယ်ချင်းက သူ့မှာကိစ္စမပြတ်သေးလို့ပါတဲ့။ ဆိုတော့ ပတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ သုံးလေးပတ်လောက်ပတ်လိုက်သေးတယ်။ မနေနိုင်တဲ့အကျင့်နဲ့ ဈေးတွေဝယ်မိပြန်ရော။ လျှော့ဈေးဆိုတာကိုးဗျ။ မရတော့ဘူး မျက်စိပိတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး Starbuck ကိုဦးလှည့်ထွက်ခဲ့ရတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာ အမှာကောင်းလို့ အအေးနှစ်ခွက်နဲ့ ငွေ ၁၁ ကျပ်ရှင်းခဲ့ရပြန်ရော။ အဲလိုတတ်ယောင်ကားလုပ်မိတာလေ။ အအေးကိုမကုန်ကုန်အောင် သောက်ရင်း ဆိုင်ထဲမှာ စောင့်ပေါ့။
သူငယ်ချင်းလာတော့ ၁၁:၄၅မိနစ်ဖြစ်တော့မယ်။ များပြားလှတဲ့လူအုပ်ကြားမှာ တိုးရင်းဝှေ့ရင်း တစ်နေရာစာကို အမိအရယူလိုက်ရတယ်။ ရိုက်ခါနီးတော့မှ ဓါတ်ခဲကကုန်နေပြီ။ သူများတွေကလည်း အော်နေပြီ။ အမြန်လဲ ပြီးတော့ Lens ကလည်း အဆင်မပြေပြန်။ တစ်ခါအမြန်မြန်လဲ။ ကဲ စဖောက်ပြီဆိုတော့ အလင်းက ချိန်လို့မရ တကယ့်ကိုးလို့ကန့်လန့်။ အခုဓါတ်ပုံကိုကြည့် အဲလိုမျိုးတော်တာ။
ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တော်တော်ညံ့ပါလားနော်။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြယ်ရောင်စုံတဲ့ညအဖြစ် မျှဝေခဲ့တယ်။ မကောင်းတာတွေကိုတော့ ဖျက်ပစ်မလို့။ အဲလို…
အိမ်ပြန်ုဖို့လမ်းလျှောက်ရင်း လက်တဲ့စမ်းတာလေးတွေလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေ ရေထဲက အရောင်တွေ။ ပြီးတော့ လမ်းမီးတိုင်လေးတွေ။ ညဘက်ရှုခင်းတွေ။ လက်တည့်စမ်းနေမိတော့တာ။
ပြီးတော့ကျနော့အတွက် အလွမ်းပြေမယ့် နေရာလေးမှာ ထိုင်ခဲ့တယ်။ အရိပ်အယောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် အငွေ့အသက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်သစ်မှာ ကျနော်နဲ့အတူရှိစေချင်တယ်လေ။
နောက်ဆုံးရထားနဲ့ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ ဆင်းရမယ့်ဘူတာရောက်တော့ အိပ်ပျော်ရာက လန့်နိုးလာလို့တော်ပါသေးရဲ့။ လမ်းလျှောက်ရင်း ဗိုက်ကဆာလာတာမို့ အ်ိမ်နားမှာပဲ ကြက်ဥပလာတာစားရင်း ကိုဇင်ယော်ကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဆန္ဒမပြည့်သွားတဲ့ ဇင်ယော်လည်း တော်တော်လေး ကဲခဲ့ပုံပါပဲ။ နောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံး ဖုန်း ဘက်ထရီကုန်သွားတာမို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့တယ်။
အိမ်ကိုရောက်တော့ မအိပ်ချင်တော့ပြန်ဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ တင်ရင်း စာတွေဖတ်ရင်း နှစ်သစ်ကူးကို လိုက်နှုတ်ဆက်နေမိတယ်။ အရမ်းငိုက်လာမှ သတိထားမိတော့ မနက်၎:၄၅ ရှိနေပြီလေ။ ၁ရက်နေ့မနက်ခင်း ကို အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကြိုဆိုလိုက်တာ နေ့လည် ၁၂:၃၀ မှ ပြန်သတိရလာတယ်။ သြော်နှစ်သစ်ရောက်ပြီပဲ……………………ဗိုက်ဆာတာဗျို့ဆိုပြီး စအော်မိတယ်.....
ဘကြီးဦးလေးက ရေးပေးပါဆိုလို့ ရေးပါတယ်….
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 12:02 AM 12 comments Links to this post
ကြယ်ရောင်စုံတဲ့ည တစ်ခုနဲ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ အမိမြေက တောင်ကြီးမီးပုံးပျံပွဲလေးကို ပြန်သတိရမိတယ်။ ညမီးကျည်တွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးလွှတ်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ ချစ်စရာ ကြယ်ရောင်စုံတဲ့ညလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ရနိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီး ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် မကျွမ်းကျင်လေတဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းအနုပညာကို ပုံတွေတိုင်းမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 4:15 AM 13 comments Links to this post